တွေးမိသမျှ | " မနာပဒါယီ "
Showing posts with label တွေးမိသမျှ. Show all posts
မေတ္တာပို့တာ သူ့အတွက်လား၊ ကိုယ့်အတွက်လား
။ အချိန် 7/28/2013 06:53:00 PM
”မေတ္တာရဲ့ သဘောက သူ့အတွက်ပို့ရင်း ကိုယ့်အတွက်လည်း အေးချမ်းခြင်း သဘောပါ”
ဒကာမလေးတစ်ယောက်က မေးဖူးပါတယ်။ “အရှင်ဘုရား မေတ္တာပို့တာဟာ ကိုယ့်အတွက် ပို့တာလား၊ သူများအတွက် ပို့တာလား”တဲ့။ ဟုတ်ပ။ သူမေးမှပဲ သတိပြုမိတော့တယ်။ ရုတ်တရက်ကြည့်ရင် ကိုယ့်မှာရန်သူတွေ နည်းစေဖို့ မေတ္တာကို ပွားများကြတာတွေလည်း ရှိနေတော့ ကိုယ့်အတွက် ပို့သလို ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ အဲဒီ မေတ္တာရဲ့ သဘောက အေးချမ်းတယ်ဆိုတဲ့အတွက် ကိုယ့်မှာအပူတွေ ရှိနေတဲ့သူတွေဟာ မေတ္တာကို များများပွားလေ့ ရှိတတ်ကြတာဆိုတော့ တစ်ဖက်ကကြည့်ရင် မေတ္တာပို့တာဟာ ကိုယ့်အတွက် ပို့တာလို့ တွေးကောင်းတွေးနိုင်တာပေါ့။
အမှန်တော့ မေတ္တာဆိုတာ အကျိုးကိုလိုးလားခြင်း၊ အထူးသဖြင့် သူတပါးအကျိုးကို လိုလားခြင်း ဖြစ်တဲ့အတွက် မေတ္တာပို့တိုင်းပို့တိုင်း သူတပါး အကျိုးကို လိုလားပြီး ပို့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် အလုံးစုံသော သတ္တဝါတွေ ဘေးရန်ကင်းပါစေ၊ စိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းပါစေ၊ ကိုယ်ဆင်းရဲခြင်း ကင်းပါစေ၊ ချမ်းသာစွာ မိမိခန္ဓာဝန်ကို ရွတ်ဆောင်နိုင်ပါစေ ဆိုပြီး ဖြူစင်သန့်ရှင်းတဲ့ စိတ်နဲ့ ပို့တာဟာ မေတ္တာအပို့ခံရတဲ့သူရဲ့ အကျိုးကို လိုလိုလားလား ပို့သခြင်း ဖြစ်တဲ့အတွက် သူများအတွက် ပို့သခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူများအတွက်ကို ပို့သခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အေးချမ်းမှုကတော့ ကိုယ့်အတွက်လို့ပဲ ပြောရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သူတပါး အကျိုးကို လိုလားပြီး သူများအတွက် မေတ္တာများများ ပွားနိုင်တဲ့သူဟာ သူတပါး ချမ်းသာလေ၊ ကိုယ်လည်းဝမ်းသာလေ ဖြစ်တဲ့အတွက် အဲဒီ မေတ္တာပွားနေ၊ မေတ္တာပို့နေတဲ့ ကိုယ့်စိတ်အစဉ်ဟာ အေးမြမှုကို ဖြစ်နေစေတာပါ။ မေတ္တာပွားများနေတဲ့အခိုက်မှာ ကိုယ့်သန္တာန်မှာ မေတ္တာရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ ဒေါသတွေ ပေါ်မလာတာဟာ ကိုယ့်အတွက် အပူသက်သာနေတာပါ။ အဲဒီလို ကိုယ်က မေတ္တာ ပို့လိုက်လို့ အပို့ခံရသူမှာ ကောင်းကျိုးတွေ ဖြစ်ထွန်းသွားပြီး ကိုယ့်ရဲ့မေတ္တာအရှိန်ကြောင့် ကိုယ့်အပေါ်မှာ ဖြစ်ပေါ်တဲ့ မကောင်းတဲ့ တုန့်ပြန်မှုတွေ မရှိတော့တာ စတာတွေဟာ ကိုယ်က သူတပါးအပေါ် စစ်မှန်တဲ့ အကျိုးကို လိုလားတဲ့စိတ်နဲ့ မေတ္တာပို့ပေးမှုရဲ့ တန်ပြန်သက်ရောက်မှု သဘောပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် မေတ္တာဟာ သူ့အကျိုးကို လိုလားပြီး ပွားများရတဲ့ ဘာဝနာကျင့်စဉ်ဖြစ်ပေမယ့် ကိုယ့်အကျိုးကိုလည်း ပြီးမြောက်စေတဲ့ သဘောပဲ ဖြစ်တဲ့အတွက် မေတ္တာထားခြင်း၊ မေတ္တာပွားခြင်းဟာ သူ့အကျိုးရော ကိုယ့်အကျိုးပါ သက်ရောက်မှု ကောင်းစေတဲ့ အလွန်အေးမြတဲ့ ကျင့်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ဆိုခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
။ အချိန် 6/08/2013 04:44:00 PM
အမှိုက်ကောက်သူတွေကို မကောက်ဖို့တားမြစ်တဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ်ကို ဖတ်လိုက်မိတော့ ဘုရားရှင်လက်ထပ်က အမှိုက်တွေကို မပျင်းမရိ လိုက်ကောက်လေ့ရှိတဲ့ ရှင်ရာဟုလာအကြောင်းကို သတိရမိခဲ့ပါတယ်။ သန့်ရှင်းရေးလုပ်တဲ့နေရာ၊ အမှိုက်ကောက်တဲ့နေရာမှာ နာမည်ကြီးလှတဲ့ ရှင်ရာဟုလာဟာ ဘယ်သူကဘယ်လိုပြောပြော အမှိုက်နဲ့ပတ်သက်၊ သန့်ရှင်းရေးနဲ့ ပတ်သက်လာရင် စိတ်ထားကောင်းကောင်းနဲ့ ကုသိုလ်ရရေးကို အထူးအလေးပေးတော်မူတာကို တွေ့ရပါတယ်။ တစ်ခါတလေ ရဟန်းတော်များက ရာဟုလာလေးရဲ့ စိတ်နေသဘောထားကို စမ်းသပ်တဲ့အနေနဲ့ တံမြက်စည်းတွေ၊ အမိုက်တောင်းတွေ၊ အမှိုက်တွေကို ဟိုချဒီချ ချထားပြီး ရှင်ရာဟုလာနဲ့ တွေ့တဲ့အခါ “ဒါတွေကို ငါ့ရှင်ထားခဲ့တာ မဟုတ်လား”လို့ မေးတဲ့အခါမှာလည်း ရာဟုလာလေးက “မှန်ပါ တပည့်တော် အခုပဲ သိမ်းလိုက်ပါမယ်၊ သန့်ရှင်းလိုက်ပါမယ်”ဆိုပြီး စေတနာကောင်းကောင်း၊ လိုလိုချင်ချင်နဲ့ကို ပြုလုပ်လေ့ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သန့်ရှင်းရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိတ်ဓာတ်ရော၊ လုပ်ရပ်ပါ ကောင်းလွန်းလှတဲ့ ရှင်ရာဟုလာရဲ့ ခံယူချက်ကတော့ တကယ့်ကိုပဲ အတုယူ ကျင့်သုံးစရာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်။ စိတ်ထားကောင်းကောင်းနဲ့သာ ပြုမူလုပ်ဆောင်တတ်မယ်ဆိုရင် ဘယ်သူဘာပြောပြော၊ ဘယ်သူအမှိုက်ကို ဘယ်လိုပဲပစ်ပစ် ကိုယ်ကောက်လိုက်တဲ့အမှိုက်၊ ကိုယ့်သန့်ရှင်းလိုက်တဲ့ ကုသိုလ်ဟာ ကိုယ့်အတွက်တော့ ကောင်းကျိုးတစ်ခုကို ဆောင်ရွတ်လိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အမှိုက်ပစ်တဲ့လူကို ရှာစရာမလိုဘဲ အမှိုက်ကောက်လိုက်တဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်စေတနာဟာ အခရာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက အပြင်ပိုင်း ရုပ်ဝတ္ထု ဆိုင်ရာ အမှိုက်ကို ပြောတာပါ။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ စိတ်ကိုပူလောင်စေတဲ့အရာ၊ စိတ်ကိုညစ်နွမ်းစေတဲ့ အရာတွေကိုလည်း အမှိုက်လို့ တင်စားပြောဆိုလေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒီအမှိုက်တွေကတော့ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ၊ မာန၊ ဒိဋ္ဌိစတဲ့ ကိလေသာ အမှိုက်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါတလေ အဲဒီအမှိုက်တွေကြောင့် ကိုယ့်စိတ်မှာ မသန့်ရှင်းပဲ လေးလံထိုင်းမှိုင်း ညစ်နွမ်းစေတာလည်း ကြုံဖူးကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမှိုက်ပစ်တဲ့သူတွေ၊ အမှိုက်ကောက်တဲ့ သူတွေကြောင့် မသန့်ရှင်းတာတွေ၊ သန့်ရှင်းတာတွေလည်း ခဏခဏ ဖြစ်နေကြတော့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ချို့က အမှိုက်ကို ဗရမ်းဗတာ ပစ်လေ့ရှိတတ်သလို၊ တစ်ချို့လည်း ပစ်သမျှ အမှိုက်တွေကို လိုက်ကောက်တာမျိုး ရှိတတ်ပါတယ်။ ကိုယ့်အမှိုက်ကို ပတ်ဝန်းကျင် ထိအောင်ပစ်တတ်သူနဲ့ အမှိုက်တွေကို သန့်ရှင်းသွားအောင် လုပ်တတ်သူ၊ အမှိုက်ပျောက်အောင် လုပ်တတ်သူနဲ့ အမှိုက်ကောက်နေတတ်သူ စသဖြင့် အမှိုက်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျင့်သုံးတဲ့သူ အမျိုးမျိုး ရှိနေတတ်ပါတယ်။
တကယ်တော့ စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာ အဲဒီစိတ်ကို ညစ်နွမ်းစေတတ်တဲ့ အကုသိုလ်၊ ကိလေသာဆိုတဲ့ အမှိုက်တွေကို အသိသတိနဲ့ သန့်ရှင်းသွားအောင် လုပ်တတ်ဖို့ အထူးလိုအပ်လှပါတယ်။ ကိုယ်သန္တာန်မှာ အမှိုက်တွေ ရှိလာပြီဆိုရင် အဲဒီအမှိုက်တွေကို အမြန်ဆုံး သန့်ရှင်းပစ်နိုင်အောာင် ကြိုးစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူများက ပစ်လိုက်တဲ့ အမှိုက်တွေ ရှိလာရင်လည်း အဲဒီအမှိုက်တွေကို လိုက်မကောက်ဖို့ ကိုယ်ကလေ့ကျင့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ယောက်ယောက်က ကိုယ့်ကို ဒေါသဖြစ်စေတဲ့ ဒေါသအမှိုက်၊ မာနဖြစ်စေမယ့် မာနအမှိုက် စတာတွေနဲ့ ပစ်လာရင်လည်း အဲဒီအမှိုက်တွေကို လိုက်မကောက်ဘဲ နေနိုင်အောင် ကြိုးစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါတလေ လူတွေက ဘာမဟုတ်တာလေးတွေ အပေါ်မှာ လိုက်ခံစားပြီး ကိုယ့်စိတ်ကို လေးလံထိုင်းမှိုင်းစေ၊ စိတ်မှာအညစ်အကြေးတွေ ဖြစ်စေတာလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။ ဒါဟာ အမှိုက်တွေ လိုက်ကောက်နေသလိုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အမှန်တော့ အမှိုက်ဆိုတာ ရှုတ်နေလို့ မကောင်းဘဲ ရှင်းနေမှ ကောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက် အမှိုက်ဆိုရင် ကိုယ့်အမှိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သူ့အမှိုက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် သန့်ရှင်းနေအောင် လုပ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုပါပဲ။ စိတ်ကို ညစ်နွမ်းစေတဲ့ ကိလေသာ အမှိုက်တွေဆိုတာလည်း ကိုယ့်စိတ်မှာ ရှင်းနေမှကောင်းပါတယ်။ စိတ်အမှိုက်ဆိုရင် ကိုယ့်ကြောင့်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ သူ့ကြောင့်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ရှင်းနေအောင် ကြိုးစားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ကို ပူလောင်ညစ်နွမ်းစေတဲ့ အမှိုက်တွေ ကိုယ့်သန္တာန်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာရင် အမြန်ဆုံးထုတ်ပစ်နိုင်အောင် အသိသတိတရား၊ ကောင်းတဲ့အမူအကျင့်များနဲ့ သန့်ရှင်းကြရမှာ ဖြစ်သလို သူများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ မကောင်းတဲ့ အမှိုက်တွေကိုလည်း ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ ခံစားမနေရအောင် အမှိုက်တွေကို လိုက်မကောက်ကြဖို့ အထူးလေ့ကျင့်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အမှိုက်ဆိုတာ ရှုတ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ ရှင်းဖို့ပါ။ အမှိုက်ဆိုတာ ကောက်ဖို့မဟုတ်ပါဘူး၊ ပျောက်ဖို့ပါ။ ကိုယ့်အမှိုက်လည်း မရှုတ်မိပါစေနဲ့။ သူများအမှိုက်တွေကိုလည်း လိုက်မကောက်မိပါစေနဲ့။ ကောက်မိရင်လည်း အမြန်ဆုံး သန့်ရှင်းပစ်နိုင်အောင် ကြိုးစားကြရမှာပါ။
ဒါကြောင့် အမှိုက်ဆိုတာ ကိုယ့်အမှိုက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ သူ့အမှိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ် အားလုံးသန့်ရှင်းအောင် ကြိုးစားဖို့လိုအပ်သလို စိတ်ကိုညစ်ပေဆိုတဲ့ အကုသိုလ်၊ ကိလေသာ အမှိုက်တွေဆိုတာလည်း ကိုယ့်ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သူ့ကြောင့်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် သန့်ရှင်းသွားအောင် လုပ်ဖို့လိုအပ်တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အမှိုက်မှန်သမျှ သန့်ရှင်းရအောင် အသိတရား၊ အကျင့်တရားများနဲ့ ကြိုးစားလေ့ကျင့်ကြရမှာ ဖြစ်ပါကြောင်း အမှိုက်အကြောင်း တစေ့တစောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
။ အချိန် 5/02/2013 03:08:00 PM
တစ်ခါတလေ ကျောင်းက ကိုရင်လေးတွေ၊ ကျောင်းသားလေးတွေကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခိုင်း၊ ကုသိုလ်အရေးတွေ လုပ်ခိုင်းတဲ့အခါ ကလေးတွေက တာဝန်ကျေပဲ ဖြစ်သလို လုပ်သွားတတ်ပါတယ်။ ပြီးပြီးရော လုပ်သွားတတ်ပါတယ်။ တစ်ခါတလေလည်း ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေ၊ စိတ်ကောင်း စေတနာကောင်းနဲ့ လုပ်တဲ့အလုပ်တွေရဲ့ ကောင်းတဲ့သက်ရောက်မှု အကြောင်းလေးတွေကို သူတုို့နားလည်လာအောင် ပြောပြဖြစ်တဲ့အခါ တစ်ချို့ကလေးတွေက မခိုင်းရဘဲ သူတို့စေတနာ အလျောက် ကုဋီဆေးလာတာ၊ တံမြက်စည်းလှဲလာတာကို တွေရတတ်ပါတယ်။ ကိုယ့်စေတနာနဲ့ ကိုယ်လုပ်ချင်လို့ လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် ကောင်းအောင်၊ သန့်အောင် လုပ်လာတတ်ပါတယ်။
အဲဒါပါပဲ။ ကောင်းတဲ့အလုပ်ပင် ဖြစ်နေပါစေ ခိုင်းလို့လုပ်ရတာထက်၊ ကိုယ့်စိတ်စေတနာနဲ့ လုပ်ဖြစ်တာက လူ့စိတ်ကို အများကြီး ကွားခြားစေတာဖြစ်ပါတယ်။ ခိုင်းလို့လုပ်တာဟာ ပြီးအောင်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် ကောင်းချင်မှလည်း ကောင်းမှာပါ။ ကိုယ့်စေတနာနဲ့ လုပ်တာကတော့ ပြီးအောင်လုပ်ဖို့ထက် ကောင်းအောင်လုပ်ဖို့စိတ်က ပိုများနေတဲ့အတွက် လုပ်တဲ့သူကိုယ်တိုင်လည်း စိတ်မှာပျော်နေတတ်ပြီး ကိုယ်လုပ်လို့ ကောင်းလာရင်လည်း ရင်ထဲမှာ အဲဒီပီတိက ကြည်နူးမှုကို ဖြစ်စေတော့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါတခါလည်း ကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုရင် ခိုင်းလို့လုပ်ရတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကောင်းတဲ့စိတ်စေတနာနဲ့ လုပ်နိုင်အောင် ကြိုးစားရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မဟုတ်လည်း ခိုင်းထားတာဆိုတော့ မလုပ်ချင်လည်းလုပ်၊ လုပ်ချင်လည်း လုပ်ရမှာပါ။ အဲဒီတော့ လုပ်ရမှာချင်းအတူတူ စိတ်ကောင်း၊ စေတနာကောင်းလေးထည့်ပြီး လုပ်လိုက်ရင် ကိုယ့်အတွက်က ပင်ပန်းတာနဲ့အမျှ ကုသိုလ်တရားလည်း ရသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုခုကို လုပ်ဖြစ်တဲ့အခါ ခိုင်းလို့လုပ်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ လုပ်ချင်လို့ လုပ်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ မလုပ်မဖြစ်လို့ လုပ်ရတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပြီးပြီးရော သဘောမျိုး မလုပ်ဘဲ ကောင်းစေချင်တဲ့ စိတ်စေတနာနဲ့ လုပ်နိုင်အောင် ကြိုးစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးအောင်လုပ်ဖို့ထက် ကောင်းအောင်လုပ်နိုင်အောင် လေ့ကျင့်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သင်္ကြန် (သုို့) ပြောင်းလဲခြင်း
။ အချိန် 4/15/2013 06:14:00 AM
မနေ့က (၁၄-၄-၂၀၁၃) ဘုန်းဘုန်းတုို့ ကုိုရီးယားနုိုင်ငံ၊ ဒယ်ဂူးမြို့မှာရှိတဲ့ စိတ္တသုခကျောင်းရဲ့ နှစ်ဦးအလှူပွဲနဲ့ ဇီဝိတဒါန ငါးလွှတ်ပွဲမှာ သင်္ကြန်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး နှစ်ဦးတရားတစ်ပုဒ် ဟောဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၄ခုနှစ်မှ ၁၃၇၅ခုနှစ်သုို့ ကူးပြောင်းခြင်းကုို ရည်ရွယ်ရင်း သင်္ကြန်ဆုိုတာ သင်္ကန္တဆုိုတဲ့ ပါဠိစကားက ဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းနဲ့ သင်္ကန္တဆုိုတာ ကူးပြောင်းခြင်းလုို့ အဓိပ္ဗါယ်ရကြောင်း စသဖြင့် ပြောဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်။ ရက်မှလ၊ လမှနှစ် စသဖြင့် တစ်ခုပြီး တစ်ခု ပြောင်းလဲနေကြတဲ့ ပြောင်းလဲခြင်းတွေထဲမှာ ကုိုယ့်ဘဝရဲ့ ပြောင်းလဲခြင်း၊ ကုိုယ့်နုိုင်ငံ၊ ကုိုယ့်လူမျိုး၊ ကုိုယ်ယဉ်ကျေးမှု၊ ကုိုယ့်ဘာသာတရား စသည်များရဲ့ ပြောင်းလဲခြင်းတွေဟာ သတိနဲ့ယှဉ်ပြီး အကောင်းဘက်ကုို ပြောင်းလဲနုိုင်အောင် ကြိုးစားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ပြောင်းလဲခြင်းဘက်ကုို ဦးတည်လာတဲ့ ဘုန်းဘုန်းတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ရွှေနုိုင်ငံကြီးရဲ့ အပြောင်းအလဲမှာလည်း ရွှေနုိုင်ငံသားများရဲ့ အကျင့်နဲ့စိတ်ဓာတ်၊ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ လုပ်ရပ်စတာတွေကုိုပါ နည်းစနစ်မှန်မှန်၊ အထောက်အပံ့ကောင်းကောင်း၊ ညီညွတ်မှု အားအပေါင်းနဲ့ ကြိုးစားပြောင်းလဲကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြောင်းတော့ပြောင်းတယ် ဗရမ်းဗတာဆုိုရင် ဒီအပြောင်းအလဲဟာ အကျိုးမပြီး အချည်းနှီးပဲ ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ ကုိုယ်တွေပြောင်းလဲဖုို့အတွက် သူများတွေ မကောင်းတွဲဖုို့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကုိုယ်တွေအကောင်းတွဲပြီး သူများတွေလည်း ဗလောင်းဗလဲ မဖြစ်ဖုို့ အရေးကြီးပါတယ်။
ပြောင်းလဲနေတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အခုဆုိုရင် ဘုန်းဘုန်းတုို့ နုိုင်ငံဟာ ဘက်ပေါင်းစုံက သိသိသာသာ ပြောင်းလဲနေကြတာကုို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နုိုင်ငံအတွက်ရော၊ လူမျိုးအတွက်ရော၊ ဘာသာအတွက်ပါ ကဏ္ဍစုံကနေ ရေရှည်စီမံကိန်းနဲ့ အကောင်းဆုံး ပြောင်းလဲနုိုင်အောင် ကြိုးစားနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နုိုင်ငံခေါင်းဆောင်များကလည်း နုိုင်ငံတုိုးတက်ဖုို့။ လူမျိုးခေါင်းဆောင်များကလည်း လူမျိုးအဆင့်မြင့်ဖုို့၊ ဘာသာခေါင်းဆောင်များကလည်း ဘာသာတည်တံ့ဖုို့ စသဖြင့် အမျိုးသားရေး စိတ်ဓာတ်နဲ့ အကောင်းဆုံး ပြောင်းလဲနုိုင်အောင် ကြိုးစားနေကြရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘုန်းဘုန်းတုို့ အနေနဲ့ကတော့ ဘာသာရေးမှာ အထူးအလေးပေးရမယ့် ဘာသာသာသနာနဲ့ ယဉ်ကျေးမှု တည်တံ့ခုိုင်မြဲ ပြန့်ပွားရေး အကျိုးဆောင်များ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဘာသာရေးနဲ့ အမျိုးသားရေးကုို ဦးတည်ပြီး အကောင်းဆုံး ပြောင်းလဲနုိုင်အောင် ကြိုးစားပေးကြရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခြေအနေနဲ့ အချိန်အခါအရ ဘုန်းဘုန်းတုို့ရဲ့ မြန်မာနုိုင်ငံနဲ့ ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကြီး မပျောက်ပျက် သွားရလေအောင် ဘာသာရေးကုိုလည်း အမျိုးသားရေး အသွင်နဲ့ စနစ်ကျကျ ပြောင်းလဲနုိုင်အောင် ကြိုးစားကြရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ အဲဒီလုို မထိန်းသိမ်းရင် မဖြစ်တော့တဲ့ အနေအထားတစ်ခုအရ အသိရှိရှိ လုပ်ကြရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီလုို ကုိုယ့်ဘာသာ၊ ကုိုယ့်နုိုင်ငံ၊ ကုိုယ့်ယဉ်ကျေးမှုကုို အကောင်းဆုံး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နုိုင်ပါမှလည်း နောင်တစ်ချိန် မြန်မာနုိုင်ငံက ဗုဒ္ဓဘာသာကြီးဟာ သမုိုင်းကြောင်း အစဉ်အလာအရ ဝါးမြိုခံခဲ့ရတဲ့ အာဖဂန်နစ္စတန်၊ ပါကစ္စတန်၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် စတဲ့ နုိုင်ငံတွေလုို ဗုဒ္ဓဘာသာ ကွယ်ပျောက်သွားတဲ့အထိ ဖြစ်မသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ တကယ်တော့ သိပ်ပြီးမေတ္တာအားကောင်း၊ သည်းခံမှုတရားကောင်း၊ နူးညံ့သိမ်မွေ့မှု အားကောင်းတဲ့ ဘာသာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆုတ်ကပ်ကာလကုို ရောက်လာနေတဲ့ ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ လုပ်ချင်ရာလုပ်ပါစေ ဆုိုပြီး သည်းခံနေလုို့ မဖြစ်တော့သလုို၊ နေချင်သလုို နေပါစေဆုိုပြီး မေတ္တာထားနေလုို့လည်း မဖြစ်တော့တဲ့ အနေအထားမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်သင့်လုပ်ထုိုက်တာ၊ ကာကွယ်သင့်ကာကွယ်ထုိုက်တာ၊ အသိပေးသင့် အသိပေးထုိုက်တာ၊ ပြောင်းလဲသင့်ပြောင်းလဲ ထုိုက်တာတွေကုို လုပ်မှဖြစ်တော့မယ့် အနေအထားမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာလည်း တစ်နည်းအားဖြင့် ပြောရင်ဘုန်းဘုန်းတုို့ ဘာသာ၊ သာသနာတော်ကြီးအတွက် သတိရှိရှိ၊ ပညာသားပါပါ အကောင်းဘက်က ပြောင်းလဲပြုပြင်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းဟာ ကုိုယ့်ခြံကုိုယ် လုံအောင်ခတ်ခြင်း သက်သက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူများကုို ဒုက္ခရောက်အောင်၊ သူများပျက်စီးအောင် လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ကုိုယ်ပုိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်၊ ကိုယ်ပုိုင်ဆန္ဒအရ သူများကုို မထိခုိုက်စေတဲ့ ကုိုယ်တွေရဲ့ ညီညွတ်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ခုသတိပြုရမှာက ကုိုယ့်နုိုင်ငံ၊ ကုိုယ့်လူမျိုး၊ ကုိုယ့်ဘာသာအတွက် စနစ်ကောင်းနဲ့ ပြောင်းလဲပြီး အကောင်းဆုံး ထိန်းသိမ်းကာကွယ်တဲ့ အခါမှာ သူများဘာသာ၊ သူများလူမျိုးကုို မုန်းတီးဖုို့၊ ခြေမုန်းဖုို့၊ အပြုတ်တုိုက်ဖုို့ မဟုတ်ဘဲ ကုိုယ့်အချင်းချင်း စည်းလုံးဖုို့နဲ့ အသိသတိ မပြတ်ရှိနေပြီး ရေရှည်ထိန်းသိမ်းနုိုင်ဖုို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မြန်တောက်ပြီး မြန်မြန်ညိမ်းသွားတဲ့ ကောက်ရုိုးမီးလုိုမဖြစ်အောင် ကုိုယ့်လုပ်ပုိုင်ခွင့်ထဲကနဲ့ ခုိုင်မာတဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့ ရေရှည်ထိန်းသိမ်းကြဖုို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆုိုကြပါစုို့။ ကုိုယ့်လူမျိုးဆုိုင်တွေမှာ အားပေးတာ၊ ကုိုယ့်လူမျိုး အချင်းချင်း ဖေးမတာ၊ ကုိုယ့်ဘာသာတူတွေဆီမှာ အကျိုးတူပူးပေါင်းတာ ဒါဟာ ကုိုယ့်ရဲ့အခွင့်အရေးပဲ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီလုိုမျိုးလေးတွေကုို ရေရှည်ထိန်းသိမ်းသွားဖုို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အားနာလုို့၊ ကျေးဇူးရှိခဲ့ဖူးလုို့၊ သက်သာလုို့ ဘာဖြစ်လုို့ ညာဖြစ်လုို့ စတဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ ကုိုယ့်ဘက်က အကောင်းလေးတွေ ပြကြမယ်ဆုိုရင်တော့ ကြာရင် အားနာလုို့ ခါးပါသွားရတဲ့ အဖြစ်မျိုး မရောက်အောင် ကုိုယ်ကထိန်းသိမ်းကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်သူတွေ ဘာပဲပြောပြော ပြောင်းလဲရမှာကတော့ ကုိုယ်ကုိုယ်တုိုင်ပဲ ဖြစ်ပြီး ကုိုယ့်ပြောင်းလဲမှုဟာ ကုိုယ့်အတွက်ရော ကုိုယ့်အမျိုးဘာသာ သာသနာအတွက်ပါ အကောင်းဆုံး ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုမျိုး ဖြစ်အောင် ပြောင်းလဲကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆုိုလုိုတာက ပြောင်းလဲခြင်းဆုိုတဲ့ နိယာယမတစ်ခုအရ ပြောင်းလဲလာနေတဲ့ ဒီနေခေတ်မှာ ကုိုယ်ကုိုယ်တုိုင်လည်း ကုိုယ့်စိတ်ဓာတ်နဲ့ ကုိုယ့်လုပ်ရပ်ပါ ပြောင်းလဲနုိုင်အောင် ကြိုးစားပြီး ကုိုယ့်အပြောင်းအလဲဟာ ကုိုယ့်အတွက်ရော ကုိုယ့်အမျိုး၊ ကုိုယ့်နုိုင်ငံ၊ ကုိုယ့်ဘာသာ၊ ကုိုယ့်ယဉ်ကျေးမှု စတာတွေ အတွက်ပါ အကောင်းဆုံး ပြောင်းလဲကြရမှာဖြစ်ကြောင်း ဆုိုလုိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အသက်သာ ကြီးလာတယ် စိတ်ဓာတ်နဲ့ လုပ်ရပ်က မကောင်းသေးတဲ့အပြင် ကောင်းအောင်ပြောင်းဖုို့လည်း မကြိုးစားဘူးဆုိုရင်တော့ အချိန်ဆုိုတာ ကုိုယ့်အတွက် သိပ်မကျန်တော့ဘူးဆုိုတာ အထူးသတိပြုကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် နှစ်ဟောင်းကောင်းဆုံးပြီး နှစ်သစ်သုို့ ကူးပြောင်းလာကြတဲ့ အချိန်အခါ သမယမှာ အားလုံးကုိုယ်စီကုိုယ်ငှ အကောင်းဘက်ကုို ပြောင်းလဲကြပြီး မကောင်းတဲ့ အကျင့်နဲ့ မကောင်းတဲ့ လုပ်ရပ်တွေကုို အတိတ်မှာထား၊ အနာဂတ် တလွှားမှာ အကောင်းများနဲ့ ပြောင်းသွားကြတဲ့ သူတွေဖြစ်အောင် ကြိုးစားကာ အမျိုးဘာသာ သာသနာနဲ့ နုိုင်ငံတော်အတွက်လည်း စနစ်မှန်မှန်၊ အကျင့်မှန်ပြီး ညီညွတ်မှု မှန်မှန်နဲ့ ရေရှည် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နုိုင်အောင် ပြောင်းလဲကြရမှာ ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးရင်း သင်္ကန္တမှသည် အစဉ်အမှန်ရကြဖုို့ အသင်အမှန် ပြကြပါစုို့လို့ အလေးဂရု တုိုက်တွန်းသမှု ပြုလုိုက်ရပါတယ်။
အားလုံး ကုိုယ်ကျန်းမာ၍ စိတ်ချမ်းသာကြပါစေ….
မနာပဒါယီ အရှင်ဝိစိတ္တ (ဒုိုက်ဦး)
။ အချိန် 10/21/2012 07:29:00 AM
တစ်စုံတစ်ယောက်၊ တစ်စုံတစ်ခုအပေါ် မျှော်လင့်နေရတဲ့ အလုပ်ဟာ အလွန်စိတ်ပင်ပန်းတဲ့ အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ မျှော်လင့်ချက်ကြီးလေ၊ ပင်ပန်းမှုကြီးလေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုဆုိုးတာက မျှော်လင့်တဲ့အတိုင်း ဖြစ်မလာခဲ့ရင် ခံစားရတဲ့ ဒုက္ခက ပိုဆုိုးလှပါတယ်။ သေချာတွေးကြည့်ရင် မျှော်လင့်နေရတာကိုက ဒုက္ခတစ်ခုလို ဖြစ်နေတာပါ။ မျှော်လင့်ချက်ရှိနေရင် ကုိုယ်ကုိုယ်တုိုင်လည်း ကုိုယ့်လုပ်ရပ်အပေါ်မှာ လွတ်လပ်သန်းရှင်းတဲ့ လုပ်ရပ်မျိုး မဖြစ်နိုင်သလို မျှော်လင့်တဲ့အတိုင်း ဖြစ်မလာရင်လည်း ကုိုယ့်ဒုက္ခကိုယ် လုပ်ယူလုိုက်သလို ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
အကောင်းဆုံးကတော့ မျှော်လင့်ချက်ကို လျော့ချလိုက်တာဟာ အကောင်းဆုံးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကုိုယ်လုပ်ပေးနုိုင်တဲ့ အရာဆုိုရင်လည်း အကျိုးသက်ရောက်မှုကုို မမျှော်မှန်းဘဲ သန့်သန့်ရှင်းရှင်း လုပ်ပေးနုိုင်အောင် ကြိုးစားပြီး ကုိုယ့်အနေနဲ့လည်း ဘယ်သူအပေါ်ကမှ မျှော်လင့်နေတာမျိုး မဖြစ်အောင် နေထုိုင်ကြည့်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကုိုယ်လုပ်မှကုိုယ်ရ၊ ကုိုယ်ရှိမှ ကုိုယ်စားရမယ့် ခေတ်ကြီးမှာ ကုိုယ့်အားကုိုယ်ကိုးလုိုက်တာဟာ အကောင်းဆုံးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မတတ်သာလုို့ မျှော်လင့်နေရတယ်ဆုိုရင်လည်း အများကြီးတော့ မမျှော်လင့်မိကြဖုို့လုိုပါတယ်။ မျှော်လင့်နေရတဲ့ဘဝဟာ ကျားသနားမှ နွားချမ်းသာရာရသလုို သူပေးမှ ကုိုယ်ရမယ့် သဘောမျိုး ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ဖြစ်နုိုင်ရင်တော့ မမျှော်လင့်တာဟာ စိတ်အသက်သာဆုံးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုတော့ကား ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အကျိုးတရားကို မျှော်မှန်းတဲ့အလုပ်ဟာ အကြောင်းတရားကို ပေါ့ပျက်သွားစေတဲ့ သဘောရှိတဲ့အတွက် ကုိုယ်ကလုပ်ပေးရတဲ့ အခါမျိုးပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ကုိုယ်အတွက် လုပ်ပေးလာကြတဲ့ အခါမျိုးမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အကျိုးတရားကို မျှော်လင့်နေတာမျိုး မဖြစ်အောင် ကြိုးစားကြဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အကျိုးတရားဆိုတာ အကြောင်းကောင်းထားရင် သူ့သက်ရောက်မှုနဲ့သူ ရှိလာနေမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကုိုယ့်အနေနဲ့ကတော့ ကုိုယ့်အကြောင်းတရားကုိုပဲ ကုိုယ်ကောင်းအောင် အားထုတ်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းမကောင်းဘဲ အကျိုးကောင်းကို မျှော်လင့်နေတဲ့အလုပ်ဟာ ကိုယ့်ကံတရားကုို မျက်ကွယ်ပြုရာရောက်နေသလို ဖြစ်တတ်တဲ့အတွက် မျှော်လင့်ချက်မထားတဲ့ စိတ်စေတနာကောင်းနဲ့သာ ကုိုယ့်အလုပ်ကုိုယ်လုပ်နုိုင်အောင် လေ့ကျင့်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် အမျှော်လင့်ကြီး မျှော်လင့်ထားပြီးမှ အကျိုးမပြီး အချည်းနှီး ဖြစ်သွားရတယ်ဆုိုတဲ့ ခံစားမှုမျိုး မဖြစ်ရအောင် ကုိုယ်ကလုပ်ရတဲ့ အခါမျိုးမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ကုိုယ့်အတွက် လုပ်ပေးလာတဲ့ အခါမျိုးမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကုိုယ့်ကုိုယ်ကုို မျှော်လင့်ချက်ကင်းကင်းနဲ့ နေထိုင်လုပ်ကိုင်နုိုင်အောင် ကြိုးစားပြီး အကျိုးကုို မျှော်မှန်းနေတာထက် အကြောင်းကို ကောင်းအောင်လုပ်လုိုက်ကြဖုို့ပဲ ဖြစ်ပါကြောင်း အသိတစ်ခု မျှဝေမှု ပြုလုိုက်ရပါတယ်။
။ အချိန် 10/18/2012 09:22:00 AM
အချစ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တစ်ယောက်က မေးဖူးပါတယ်။ အများကြီး မသိပေမယ့် သဘာဝဓမ္မအရ ပြောရရင် မေတ္တာ မဟုတ်တဲ့ အချစ်ဟာ တဏှာပေမနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့အတွက် ပူလောင်မှုကုို ဖြစ်စေတာ အမှန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကုိုယ်ကချစ်လုိုက်ရတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကုိုယ့်ကုို အချစ်ခံလုိုက်ရတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကြာတော့ အဲဒီအချစ်တွေက ငြိမ်းချမ်းမလာဘဲ ပူလောင်မှုတွေသာ ဖြစ်လာနေတော့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုဆုိုးတာက ကုိုယ့်ကုို မချစ်တဲ့သူတွေကုို ကုိုယ်က ချစ်မိတဲ့အခါ၊ ကုိုယ်မချစ်တွေသူရဲ့ အချစ်ကုို ခံရတဲ့အခါတွေမှာ ဒီအချစ်ရဲ့ ပူလောင်မှု သဘောကုို ကောင်းကောင်းခံစားကြရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် မြတ်စွာဘုရားရှင်က “အချစ်တွေနဲ့ လွဲရခြင်း၊ အမုန်းတွေနဲ့ တွဲရခြင်းဟာ ဆင်းရဲခြင်းပဲ”လုို့ ဟောတော်မူတာ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ချို့က အချစ်စစ်အချစ်မှန်ဆုိုတာ ရယူလုိုမှု မရှိဘူးလုို့ ဆုိုကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အချစ်လုို့ ပြောရင်တော့ ရယူချင်တာ၊ ပုိုင်ဆုိုင်ချင်တာကတော့ ရှိနေကြမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရယူချင်မှု၊ ပုိုင်ဆုိုင်ချင်မှု ရှိနေသမျှ ဒီအချစ်ဟာ ဘယ်လုိုမှကို ငြိမ်းချမ်းနုိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲ ရယူပုိုင်ဆုိုင်မှု မရှိဘဲ အကျိုးလုိုလားခြင်း သက်သက်ပဲဆုိုရင်တော့ ဒါဟာ အချစ်ထက်ကျော်လွန်သွားတဲ့ မေတ္တာ သဘောမျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မေတ္တာဆုိုရင်တော့ သူ့အကျိုးကုို လုိုလားခြင်း ဖြစ်တဲ့အတွက် သူချမ်းသာလေ ကုိုယ်ဝမ်းသာလေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလုို အချစ်မဟုတ်တဲ့ မေတ္တာသဘောမျိုး ဆုိုရင်တော့ မေတ္တာများလေ ငြိမ်းချမ်းမှု အားကောင်းလေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ခက်တာက ပုထုဇဉ် သဘာဝ မေတ္တာထားဖုို့ထက် ချစ်စရာပွားဖုို့ပဲ လုိုလားကြတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် သားသမီးအပေါ် အချစ်ကြီးတဲ့ မိဘတွေ၊ မိဘအပေါ် အချစ်များတဲ့ သားသမီးတွေ၊ ဇနီးမယားအပေါ် အချစ်ပုိုတဲ့ လင်ယောက်ျားတွေ၊ လင်ယောက်ျားအပေါ် အချစ်လုိုတဲ့ ဇနီးမယားတွေ၊ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အချစ်ကြီးတဲ့ သမီးရည်းစားတွေ စသဖြင့် ဘယ်လုိုအသုိုင်းအဝုိုင်းမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အချစ်ကြီးလေ အပြစ်ကြီးလေ၊ အချစ်များလေ အပြစ်များလေ၊ အချစ်ကြီးလေ အမျက်ကြီးလေ ဖြစ်နေကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အချစ်တွေများတော့ ကုိုယ်ချစ်တဲ့သူတွေအပေါ်မှာ ဖြစ်စေချင်တာတွေ၊ မျှော်လင့်တာတွေ စသဖြင့် များနေပြီး အဲဒီအတုိုင်း ဖြစ်မလာတဲ့အခါမှာလည်း အပြစ်တွေ၊ အမျက်တွေအထိ ပွားလာစေတော့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အချစ်ကုို အခြေခံရာက ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အကျိုးဆက်ဟာ ငြိမ်းချမ်းဖုို့ထက် ပူလောင်ဖုို့က ပိုများနေတတ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆုိုတော့ကား အကောင်းဆုံးကတော့ အချစ်တွေ မကင်းသေးတဲ့ ပုထုဇဉ်တွေ အနေနဲ့ အချစ်တွေကနေ မေတ္တာအဖြစ် မပြောင်းနုိုင်သေးရင်လည်း ပူလောင်ခံစားမှုတွေ သက်သာအောင် အချစ်တွေကို လျော့ချကြည့်ဖုို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အချစ်အစား မေတ္တာထားလာနုိုင်အောင် တဖြည်းဖြည်း လေ့ကျင့်ကြည့်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လုိုအရာ၊ ဘယ်လုို ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအပေါ်မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အချစ်တွေနဲ့ နွေးထွေးစေတာထက် အကျိုးလုိုလားတဲ့ မေတ္တာတရားနဲ့ နွေးထွေးနုိုင်အောင် ကြိုးစားကြည့်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆုိုရင်တော့ နေရတဲ့အခုိုက်မှာ အထုိုက်အလျောက် သက်သောင့်သက်သာ ရှိလာကြမှာ အမှန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် အချစ်ဆိုရင် ကုိုယ်ကချစ်လုိုက်ရတာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ကုိုယ့်ကုို အချစ်ခံရတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် နှစ်ခုလုံးဟာ ငြိမ်းအေးမှုထက် ပူလောင်မူကိုသာ ဖြစ်စေတတ်တဲ့အတွက် အချစ်အစား မေတ္တာမထားနုိုင်သေးတောင်မှ ကိုယ့်ကုိုယ်ကုို သက်သောင့်သက်သာ ဖြစ်စေဖုို့ အချစ်တွေကုို လျော့နုိုင်သမျှ လျော့ချစ်ကြပြီး အချစ်အစား အမုန်းမပွားနုိုင်အောင်လည်း မေတ္တာတရား၊ ဥပေက္ခာတရားလေးထားပြီး နေထုိုင်နုိုင်အောင် ကြိုးစားကြရမှာ ဖြစ်ပါကြောင်း အချစ်အကြောင်း တစ်စေ့တစောင်း အသိပေးတင်ပြလုိုက်ရပါတယ်။
။ အချိန် 10/15/2012 04:33:00 AM
တစ်လောက မေးခွန်းတစ်ခု ရောက်လာပါတယ်။ တစ်ဘက်သူက ဘယ်လုိုမှကို ကုိုယ့်အပေါ်မှာ မကောင်းတဲ့အတွက် အဲဒီသူအပေါ်မှာ လောကကြောင်းအရ ပြုကျင့်ပေးရမယ့် ဝတ္တရားတွေ မလုပ်ပေးဘဲ နေခြင်းဟာ ဝတ္တရားပျက်ရာ ရောက်ပါသလား၊ သူမကောင်းလုို့ ကုိုယ်အကောင်းမလုပ်ပေးတဲ့အတွက် မကောင်းတဲ့၊ တာဝန်မကျေတဲ့ သူထဲမှာ ကုိုယ်လည်းအကျုံးဝင်သွား ပါသလားတဲ့…။
ကုိုယ်ချင်းစာမိပါတယ်။ ပုထုဇဉ် သဘာဝ ခံရပါများတော့လည်း အဲဒီလုို အတွေးတွေ ဝင်မိကြမှာ အမှန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတော်ကောင်းစိတ်၊ သူတော်ကောင်း နှလုံးသားဆုိုရင်တော့ သူမကောင်းလုို့ ကုိုယ်ပါလုိုက်ပြောင်းပြီး မကောင်းလုပ်တာ၊ သူမဟုတ်လုို့ သူ့အပေါ်မှာ ပြုကျင့်ရမယ့် ဝတ္တရားတွေ ပျက်ကွက်တာ စတာတွေ လုပ်ဖြစ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ရင့်ကျက်တဲ့ သူတစ်ယောက်ဟာ သူ့အပြစ်ကုို ကုိုယ့်အပြစ်ဖြစ်အောင် လုပ်ဖြစ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူမကောင်းတာ သူ့အကြောင်းပဲ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကုိုယ့်ဘက်ကတော့ အတတ်နုိုင်ဆုံးကောင်းအောင် ကြိုးစားဖြစ်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလုို လေ့ကျင့်ခြင်းဟာ သံသရာကုို အဆက်ဖြတ်ခြင်းပဲ ဖြစ်တဲ့အတွက် လုိုက်နာလေ့ကျင့်သင့်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တော့ သံသရာရှည်စေမှုဟာ သူတပြန် ကုိုယ်တပြန်တွေကြောင့် ရှည်စေကြတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဝဋ်ကြွေးရှိလုို့ ပေးဆပ်နေရတဲ့ အပုိုင်းမှာ ကုိုယ်ပါလုိုက်ပြီး သူ့လုို ပြုကျင့်မိလုို့ သံသရာ ထပ်ရှည်မယ်ဆုိုရင် အကြွေးတွေက ဆပ်ပြီးရင် ဆပ်နေကြရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့ သူ့အမှားဟာ ကုိုယ့်အမှားမဖြစ်အောင်၊ သူပျက်ပေမယ့် ကုိုယ်မပျက်ဘဲ နေနုိုင်အောင် ကြိုးစားခြင်းဟာ အကောင်းဆုံးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သံသရာအဆက်ကုို သူမဖြတ်လည်း ကုိုယ်ဖြတ်နုိုင်အောင် ကြိုးစားခြင်းဟာ အမှန်ဆုံးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
။ အချိန် 10/11/2012 09:14:00 AM
လူအတော်များများက အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ ဟန်ပြလုပ်တာတွေ၊ ဟန်ဆောင်လုပ်တာတွေကို လုပ်ပြလေ့ရှိတတ်ပါတယ်။ စေတနာ မပါဘဲ သူများအထင်ကြီးအောင်၊ သူများလေးစားအောင် လူရှေ့သူရှေ့ ဟန်ဆောင်လေ့ ရှိတတ်ပါတယ်။ ဒါဟာ အမှန်ပြယုဂ်မဟုတ်ဘဲ ဟန်ဆောင်သရုပ်သာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အချိန်တန်တော့လည်း သူ့အလုိုလုို လဲသွားကြတော့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အမှန်တော့ ကုိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်ဟာ သူများအထင်ကြီးဖုို့၊ သူများချီးကျူးခံရဖုို့ အဓိကမကျပါဘူး။ ကုိုယ့်စေတနာ မှန်ဖုို့ပဲ အရေးကြီးလှတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေမှာ စေတနာမှန်နဲ့သာ လုပ်သွားကြမယ်ဆိုရင် ဘယ်သူအထင်ကြီးကြီး မကြီးကြီး၊ ဘယ်သူလေးစားစား မစားစား ကုိုယ့်ကုိုယ်ကိုတော့ ကုိုယ်ကုိုယ်တုိုင် အထင်ကြီးလေးစားနုိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကုိုယ့်ကိုယ်စောင့်နတ်နဲ့ သူတော်ကောင်းတွေကတော့ သာဓု ခေါ်နေကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဓိကကတော့ စေတနာ အဟုတ်နဲ့ အမှန်လုပ်ဖုို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စေတနာမှန်မယ်၊ ရုိုးသားမယ်ဆုိုရင် အကျိုးတရားဆုိုတာ အချိန်တန်ရင် ကုိုယ်ကမမျှော်လည်း သူ့အလုပ်သူလုပ်၊ သူ့အကျိုးသူပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သေချာတာကတော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စေတနာမမှန်ရင် ကြာကြာမခံဘူးဆုိုတာ အသေအချာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
။ အချိန် 10/08/2012 06:46:00 AM
တစ်ချို့က တစ်ယောက်တည်းနေလည်း ပြဿနာဖြစ်တယ်။ အများနဲ့နေလည်း ပြဿနာ ဖြစ်တယ်။ ဘယ်မှာ ဘယ်သူနဲ့ နေနေ အဆင်မပြေ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ကုိုယ့်ကုိုယ်ကုို ပြုပြင်မှု၊ ကုိုယ့်စိတ်ကို ဆင်ခြင်မှု အားနည်းလုို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တော့ ဘဝမှာ အထီးကျန်ခြင်း၊ မကျန်ခြင်းဆုိုတာဟာ အမြဲမြောင်းလဲနေတဲ့ လောကဓံ သဘောပဲ ဖြစ်တဲ့အတွက် တစ်ယောက်တည်းရှိနေလည်း နေတတ်အောင် ကြိုးစားရမှာ ဖြစ်သလုို၊ အများနဲ့ဆုိုလည်း နေတတ်အောင် ကြိုးစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
။ အချိန် 10/06/2012 07:32:00 AM
သက်မဲ့တစ်ခုကြောင့် သက်ရှိအစုကို သတ်ဖြတ်ကြသူများ
ပညတ်တစ်ခုကြောင့် အပြစ်မဲ့တစ်စုကို သတ်ဖြတ်ကြသူများ
အစွဲတစ်ခုကြောင့် အလွဲအမှုကို ပြုလုပ်ကြသူများ
ကိုးကွယ်ရာမှားလို့ ဒို့ဘာသာတရားကို ထုိုးနှက်ကြသူများ
စသည်စသည်ဖြင့် ဒေါသသမားတွေက ကိုယ့်တရား ကုိုယ်မစီရင်၊ ကုိုယ့်ကုိုယ်ကုို မဆင်ခြင်ဘဲ အသတ်တွေ လွဲနေကြပေပေါ့။
အပြင်ပိုင်းအသွင်ကို အထင်အတုိုင်း အမြင်တွေနဲ့ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ် ရက်စက်ပစ်ကြပေမယ့် ကုိုယ့်အတွင်းပိုင်းမှာတော့ လောဘမီး၊ ဒေါသမီး၊ မောဟမီး၊ မာနမီးတွေကြောင့် ထင်တိုင်းတောက်ကာ အပူလှိုင်းအောက်မှာ လူရိုင်းသဘောက်ပုံပေါ်ပြီး မြင်သမျှသူတွေအပေါ်မှာ ချမ်းသာမဖြစ် နွမ်းစရာညစ်ပင် ဖြစ်နေကြပေပေါ့။
လောဘအပူမီး၊ ဒေါသအပူမီး၊ မောဟအပူမီးတွေနဲ့ မြင်မြင်သမျှမဆင်ခြင် ထင်သမျှသူတွေကို သတ်ဖုို့ကြိုးစားနေကြပေမယ့် ကိုယ့်အပူမီး ကုိုယ်မညိမ်းနုိုင်၊ ကုိုယ်ဒေါသမီး ကုိုယ်မသတ်နုိုင်တော့ မြင်ရသူမှာ မအေးချမ်း ဘေးမသန်းပါစေနဲ့လုို့ပဲ မေတ္တာရှေ့ထား တွေ့ရာကို ပွားနေကြရပြန်ပေါ့။
တွေကာမနှေး အသေအချာတွေးရင် မြင်မြင်တကာ မသတ်ခင် ကိုယ့်ကုိုယ်ကိုဆင်ခြင် ကုိုယ့်အသွင် ကိုယ်ပြင်ပြီး ကုိုယ့်အတွင်းရန် ကုိုယ်တွန်းလှန်နုိုင်အောင် ကြိုးစားရမှာပါ။
ကုိုယ့်အပူမီး ကုိုယ်အရင်ညိမ်းပြီး ကုိုယ့်မီးကုိုယ်သတ် ကုိုယ့်ကုိုယ်ကုို အရင်ဖြတ်ကြရမှာပါ။
ကုိုယ့်ဒေါသကုို ကုိုယ်ဆင်ခြင် ကုိုယ့်ကုိုယ်ကုို ပြင်ပြီး အပြင်မရောက် ထင်သလုို မဖောက်နုိုင်အောင် အားထုတ်ကြရမှာပါ။
ကုိုယ့်လောဘ၊ ကိုယ့်မောဟနဲ့ ကုိုယ့်မာနပါ ကုိုယ့်ဣဿာတွေဟာ သူ့ကုိုမသတ် ကုိုယ့်ကုိုသတ်နေတဲ့ အတွင်းမီးလျှံ အတွင်းရန်တွေပဲ ဖြစ်တဲ့အတွက် မှတ်လုိုသပ သတ်လုိုကြရင်ဖြင့် တခြားမသတ် အတွင်းရန်ကုိုပဲ သတ်ကြရမှာပါ။
ဒါကြောင့် ဟုိုယုိုးဒီယိုး ထင်အငြိုးတွေနဲ့ ဟုိုဖြတ်ဒီဖြတ် အသွင်သတ်နေကြတဲ့ သူတွေအနေနဲ့ ရတက်မစွဲ အသတ်မလွဲရအောင် သူ့ကုိုမသတ် ကုိုယ့်ကုိုသတ်နေတဲ့ အတွင်းအပူစာ ကိလေသာတွေကိုသာ အချိန်ရှိခိုက် လုံ့လစုိုက်ပြီး သတ်လုိုက်ကြပါ အုို လူတကာတုို့…။
။ အချိန် 10/01/2012 08:40:00 AM
ဆိုတော့ကား ကုိုယ်ဘာလုိုချင်လဲဆုိုတာ ကိုယ်ကုိုယ်တုိုင် ရွေးချယ်ပြီး ကုိုယ်က အပြုံးလုိုချင်ရင် ကုိုယ်ကအရင် ပြုံးပြရမှာဖြစ်သလုို ကုိုယ်က အကောင်းကြားချင်ရင်လည်း ကုိုယ်ကအရင် အကောင်းပြောပြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလုိုပဲ ကုိုယ့်ကုို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ဆက်ဆံစေချင်ရင် ကုိုယ်ကအရင် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုမူနေထုိုင် ဆက်ဆံပြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
။ အချိန် 9/25/2012 08:52:00 AM
ဒကာတစ်ယောက်က မေးလျှောက်လာပါတယ်။ “ဘုန်ုးဘုန်းဘုရား တပည့်တော် အခုတလော ကုိုယ့်ကုိုယ်ကုို စိတ်တွေအရမ်း ကြမ်းလာတယ်လုို့ ခံစားမိပါတယ်၊ ထစ်ခနဲဆို စိတ်တုိုလုိုက်၊ ထစ်ခနဲဆုို အလုိုမကျဖြစ်လုိုက်၊ ထစ်ခနဲဆုို ပါးစပ်က ဆဲလုိုက်ဆုိုလုိုက် စတာတွေ အလွယ်တကူကုို လုပ်ဖြစ်လာတယ်လုို့ ထင်ပါတယ်၊ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် တပည့်တော် စိတ်ရိုင်းတွေ ဝင်နေတယ်ဆုိုတာ သတိပြုမိလာပါတယ်၊ သတိပြုမိတဲ့အလျောက် ထိန်းနုိုင်အောင် ကြိုးစားကြည့်ပေမယ့် မရဘူး ဖြစ်နေပါတယ်ဘုရား၊ အဲဒါ ဘယ်လုိုလုပ်ရင် ကောင်းမယ်ဆုိုတာ တပည့်တော်ကို အကြံပြု မိန့်ကြားပေးပါး ဘုရား”ဆုိုပြီး သူကအကြံဉာဏ် တောင်းခံရင်း လျှောက်ထားလာပါတယ်။
သူ့လျှောက်ထားချက်ကို နားထောင်ပြီး “အင်း ဒါဆိုရင်တော့ ဒကာ့မှာ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ များနေပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ သက်ရောက်မှုတွေက မကောင်းဘဲ ဖြစ်နေတဲ့ သဘောရှိပါတယ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ အလုပ်တွေရယ်၊ အလုပ်မှာရှိတဲ့ သူတွေရဲ့ အပြုအမူတွေရယ်၊ အလုပ်မှာရှိတဲ့ ဖိအားတွေရယ် စတာတွေက ဒကာ့ကို စိတ်အစဉ်ကြမ်းတမ်းအောင်၊ အလုိုမကျ ဖြစ်အောင် လုပ်နေတဲ့ သဘောရှိပါတယ်၊ ပုိုဆုိုးတာက အဲဒီလုို ဖိအားတွေ ရှိနေတဲ့အချိန်မှာ ဘာသာတရားနဲ့ ဝေးကွာပြီး မထူးပါဘူးဆိုကာ ဖြစ်သလုို နေပစ်လုိုက်တာက စိတ်ကုိုပုိုပြီး ကြမ်းတမ်းစေတတ်တဲ့ သဘောရှိပါတယ်၊ စိတ်အစဉ်ကုို နူးညံ့သိမ်မွေ့အောင် လုပ်ပေးနုိုင်တဲ့ တရားနားတဲ့အလုပ်၊ တရားစာဖတ်တဲ့ အလုပ်၊ တရားမှတ်တဲ့ အလုပ်၊ မေတ္တာပုို့ ဂုဏ်တော်ပွားတဲ့ အလုပ်၊ ကုိုယ်ကျင့်တရားကောင်းအောင် ထိန်းသိမ်းတဲ့ အလုပ်တွေနဲ့ ဝေးကွာစေမှုဟာလည်း ဘဝမှာ စိတ်အစဉ်ကုို ပုိုမုိုပြီး ရုိုင်းစုိုင်းစေတတ်တာ ဖြစ်ပါတယ်” စသဖြင့် ပြောပြရင်း စိတ်ကုိုပြောင်းလဲစေတတ်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ စိတ်ကုိုနူးညံ့စေတတ်တဲ့ ဓမ္မအားတွေအကြောင်း ပြောကြားပေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ စိတ်ရဲ့ဖိအားနဲ့ အဲဒီဖိအားကို ရင်ဆုိုင်ကျော်လွှားနုိုင်တဲ့ အသိတရားအကြောင်း အကြံပြု ပြောကြားပေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်။ လူဟာ ကုိုယ့်ကုိုယ်ကုို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နုိုင်မှုက အဓိကကျပေမယ့် ပုထုဇဉ်တွေအတွက် အဲဒီလုို စိတ်ထိန်းကြောင်းမှု အပုိုင်းမှာ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ရိုက်ခတ်မှု၊ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ထောက်ပံ့မှု၊ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ လွှမ်းမုိုးမှုတွေဟာ အများကြီး သက်ရောက်မှု ရှိနေတတ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါတလေ ဗီဇကောင်းတဲ့ သူတွေတောင်မှ ပတ်ဝန်းကျင် မကောင်းရင် မကောင်းတဲ့ လွှမ်းမုိုးမှုတွေ ကူးစက်ခံရတတ်သလုို မွေးလာတဲ့ ဗီဇက မကောင်းပေမယ့် ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းရင် ကောင်းတဲ့အမူအကျင့်တွေဘက်ကို အထုိုက်အလျောက် ပြောင်းသွားတတ်တာလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။ ဒီသဘောတရားကို နုိုင်ငံခြားမှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ရောက်နေကြတဲ့ သူတွေက ပိုပြီးသိရှိ ခံစားမိကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာကတော့ ပိုက်ဆံရတာ တစ်ခုကလွဲပြီး ကျန်တဲ့အပိုင်းမှာ ဖိအားတွေနဲ့ပဲ လွှမ်းမုိုးခံနေကြရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်ရဲ့ ဖိအားက တစ်မျိုး၊ အလုပ်ရှင်ရဲ့ ဖိအားကတစ်မျိုး လုပ်ဖော်ကုိုင်ဖတ်တွေရဲ့ ဖိအားကတစ်မျိုး စသဖြင့် အမျိုးမျိုး ရှိနေတဲ့ကြားက အိမ်ကုိုလွှမ်းလုို့ ဖုန်းဆက်မိပြန်တော့ အိမ်ကကြားရတဲ့ သတင်းစကားတွေက ဖိအားကို မတွန်းလှန်နုိုင်ဘဲ စိတ်အစဉ်ကုို ပုိုပြီး ပိပြားသွားစေတတ်ကြ ပြန်ပါတယ်။
အဲဒီလုို အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် ဖိအားတွေဝင်ပြီး စိတ်အစဉ်မှာ ပင်ပန်းနေတဲ့ သူတွေအနေနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းနဲ့ အပေါင်းအသင်းကောင်းဟာ သိပ်ကုိုအဓိက ကျလှပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းနဲ့ အပေါင်းအသင်းကောင်းတွေရဲ့ ထောက်ပံ့မှုအားဟာ ကျနေတဲ့ စိတ်ကို ပြန်လည်တက်ကြွ စေတတ်ပြီး ခွန်အားတွေကုို ဖြစ်စေတတ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်မကောင်းလုို့ ဖိအားတွေကုို ဖြစ်ပေါ်စေတတ်ပေမယ့် အကောင်းဘက်ကုို ညွန်ပြပေး၊ အားပြုပေးမယ့် ကလျာဏမိတ္တရဲ့ ပံ့ပုိုးမှုဟာ ဖိအားတွေကနေ ရုန်းထွက်နုိုင်တဲ့အထိ ပံ့ပုိုးပေးနုိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အဲဒီလုို ကလျာဏမိတ္တရဲ့ အားတွေအပြင် မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ ဓမ္မအားတွေနဲ့ပါ တွဲပြီး ဘဝကုိုဓမ္မနဲ့ ယှဉ်လာနိုင်မယ်ဆုိုရင်တော့ ဒါဟာ ဖိအားကုို အသိတရားနဲ့ ကျော်လွှားနုိုင်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖိအားတွေကြောင့် စိတ်အစဉ်တွေ ကြမ်းတမ်းလာပြီး အသိတရားပါ ပျောက်လာတဲ့အခါမှာ တရားဓမ္မအားနဲ့ ပြန်လည်ပြုပြင်နုိုင်ခြင်းဟာ ဘာနဲ့မှမတူတဲ့ အကောင်းဆုံး ပြုပြင်နုိုင်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြောင်းလဲခြင်းတွေထဲမှာ ဘဝကုို ဓမ္မနဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းဟာ တကယ့်ကုို နူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့ အပြောင်းအလဲပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သေချာတွေးကြည့်ရင် စိတ်ကြမ်းတွေဝင်လာတယ်၊ စိတ်အစဉ်ရုိုင်းလာတယ်၊ စိတ်မှာ အလုိုမကျတာတွေ၊ စိတ်ဆုိုးစိတ်တုိုတာတွေ ဖြစ်လာနေတယ်ဆုိုတာဟာ တကယ်တော့ စိတ်မှာ အသိတရားတွေ နည်းလာ၊ ကုိုယ်ကျင့်တရားတွေ လျော့လာ၊ မေတ္တာအားတွေကျလာလုို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သာမန်ကြည့်ရင်တော့ အခုလုို စိတ်ရုိုင်းစိတ်ကြမ်းတွေ ဖြစ်လာတယ်ဆုိုတာဟာ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ရုိုက်ခတ်မှုတွေ၊ လောကဓံတွေကြောင့်လုို့ ဆုိုနုိုင်ပေမယ့် တကယ်တမ်း အဓိက အခရာကျတာက အသိတရား၊ အကျင့်တရားတွေနဲ့ ကုိုယ်ကုိုယ်ကုို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နုိုင်မှု အားနည်းလုို့ပဲလုို့ ဆုိုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အတက်အကျ အနိမ့်အမြင့် အဆုိုးအကောင်းစတဲ့ လောကဓံဆုိုတာကတော့ အားလုံးအတွက် အချိန်မရွေး ပြောင်းလဲဖြစ်ပျက်နေကြမှာပဲ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီအပြောင်းအလဲတွေအပေါ်မှာ အသိတရားလက်ကုိုင်ထားပြီး ရင်ဆုိုင်ကျော်လွှားနုိုင်မှု အားနည်းတဲ့သူဟာ ဒီဒဏ်တွေကုို ပုိုပြီးခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဖိအားနဲ့ အပြောင်းအလဲ တရားတွေကုို ခံနုိုင်ရည်ရှိဖုို့အတွက် အသိတရားနဲ့ အကျင့်တရားက သိပ်အရေးကြီးတယ်လုို့ ဆုိုရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဆုိုတော့ကား အသိတရားတွေ၊ အကျင့်တရားတွေ ပုိုမုိုတုိုးတက် လာဖုို့အတွက် အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းကို ရှာဖွေကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် အကောင်းဆုံးက တရားနှလုံးသွင်းကြဖုို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တရားအသိရှိတဲ့သူ၊ တရားအကျင့် ရှိတဲ့သူဟာ တရားနဲ့အညီ နေထုိုင်ကျင့်သုံး လာတတ်တဲ့အတွက် အမူအရာတွေဟာ သိသိသာသာကုို ပြောင်းလဲလာတတ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကြမ်းတမ်းတဲ့ အပြုအမူ၊ အပြောအဆုို၊ အကြံအစီတွေဟာ တရားအားနဲ့ တဖြည်းဖြည်း ပါးပါးလာပြီး စိတ်အစဉ်ဟာ နူးညံ့သိမ်မွေ့လာတော့တတ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးဟာ မမြဲဘူးဆိုတဲ့ ဓမ္မအသိကုို နှလုံးသွင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်း ငါဆုိုတဲ့ မာနတွေဟာ ခဝါကျလာပြီး လူအများအပေါ် ကုိုယ်ချင်းစာတရားတွေ ထားတတ်လာတော့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ တရားတကယ်သိလာပြီဆုိုရင် အသိတရားနဲ့ အကျင့်တရားတွေပါ တုိုးတက်လာပြီး အဲဒီအသိအကျင့်ကပဲ ကုိုယ့်ကုိုယ်ကုို ထိန်းသိမ်းထားနုိုင်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်းစစ်တော့ ဒါဟာ တရားနဲ့အညီ ကျင့်သုံးနေထုိုင်လာတဲ့ အတွက်ကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဖိအားတွေများပြီး စိတ်ပင်ပန်းကာ စိတ်ကြမ်းလာကြတဲ့ သူတွေအနေနဲ့ ဒီလုိုဖြစ်လာတာဟာ ကုိုယ့်သန္တာန်မှာ အသိတရား၊ အကျင့်တရားနဲ့ ဓမ္မအားတွေ လျော့နည်းလာလုို့ ဖြစ်တယ်ဆုိုတာ သတိပြု ဆင်ခြင်ပြီး ကြမ်းတမ်းရုိုင်းစုိုင်းလာတဲ့ ကုိုယ်နှုတ်စိတ် အမူအရာတွေကုို နူးညံ့သိမ်မွေ့ပြီး လောကဓံကုို သည်းခံနုိုင်တဲ့ စိတ်အစဉ်တွေ တုိုးတက်လာဖုို့အတွက် တရားများများနာ၊ ကုိုယ်ကျင့်သီလကုို လုံအောင်စောင့်ထိန်း၊ မေတ္တာလည်းပုို့ ဂုဏ်တော်လည်းပွားကာ ဝိပဿနာ တရားပါ အားထုတ်ရင်း တရားအလုပ်နဲ့ အတူ ကုိုယ့်ကုိုယ်ကုို အုပ်ချုပ်နုိုင်အောင် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း နေထုိုင်ကြရမှာ ဖြစ်ပါကြောင်း ဖိအားနဲ့ အသိတရားအကြောင်း သတိထားနုိုင်အောင် သိသမျှနဲ့ အသိမျှလုိုက်ရပါတယ်။
။ အချိန် 9/23/2012 04:31:00 AM
လူဟာ အပြိုင်အဆုိုင်ရှိမှ တုိုးတက်မှု ပုိုအားကောင်းလာတတ်ပါတယ်။
ပြေးလမ်းကုိုယ်စီနဲ့ သူပြိုင်ကုိုယ်ပြိုင် အပြိုင်ကြဲနုိုင်မှ အားကြိုးမာန်တက် ပြုလုပ်တတ်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ခုတော့ ရှိတယ် ကုိုယ်လမ်းကိုယ်လျှာက်ပြီး ပြိုင်နုိုင်အောင်တော့ ကြိုးစားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကုိုယ်အနုိုင်ရရေး သူများလမ်းကုို ဝင်ပြေးတာတုို့ သူများမပြေးနုိုင်အောင် လုပ်တာတုို့၊ ကိုယ့်လမ်းကုိုယ်မလျှောက်ဘဲ သူများကုိုမှောက်အောင် လုပ်တာတုို့ ဆုိုရင်တော့ စစ်မှန်တဲ့ ပြိုင်ဆုိုင်မှုမျိုး မဟုတ်ဘဲ နည်းလမ်းမကျတဲ့ ပြိုင်ဆုိုင်မှုမျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလုို သဘောမျိုးဆုိုရင်တော့ မကောင်းတဲ့ ဘက်ကုို ဦးတည်သွားတတ်ကြကာ မကောင်းမှုရဲ့ အပြစ်က အချိန်တန်ရင် ကုိုယ့်ဆီပြန်ရောက်လာတတ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
သေချာတွေးကြည့်ရင် ကုိုယ့်လမ်းကုိုယ်မလျှောက်ဘဲ သူများလမ်းကုိုလျှောက်ပြီး သူများလဲအောင် ခြေထုိုးခံတဲ့သူဟာ အဲဒီခြေထုိုးခံနေတဲ့ အချိန်မှာတော့ သူလည်းရှေ့ကုို မလျှောက်နုိုင်ဘူးဆုိုတာ သတိပြုကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့ ဘယ်သူ့ကုိုယ်မှ မထိခုိုက်တဲ့ ကုိုယ်ကုိုယ်ကုို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ယှဉ်ပြိုင်တတ်တဲ့ စိတ်နဲ့ ကြိုးစားခြင်းကသာ အကောင်းဆုံးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလုိုဆုိုရင် အတိတ်ကံမကောင်းလုို့ အောင်မြင်မှုတွေ ထင်သလောက် မရနုိုင်တာတောင်မှ ဝီရိယအကျိုးကတော့ သေချာပေါက် ခံစားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြိုင်ဆုိုင်မှုတွေထဲမှာ ကုိုယ့်ကုိုယ်ကုို ပြိုင်ဆုိုင်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကုိုယ့်ရဲ့ အမူအရာတွေ၊ အပြောအဆုိုတွေ၊ အတွေးအကြံတွေနဲ့ ပြိုင်ဆုိုင်တာဟာ အကောင်းဆုံးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကြမ်းတမ်းနေတဲ့ ကုိုယ့်ရဲ့အမူအရာတွေကုို နူးညံ့လာအောင်၊ အပြစ်များတဲ့ ကုိုယ့်ရဲ့အလုပ်တွေကုို အပြစ်နည်းလာအောင်၊ မနေ့က ကုိုယ်နဲ့ ဒီနေ့ကုိုယ် ကုသုိုလ်ဖြစ်တာချင်း၊ နူးညံ့သိမ်မွေ့လာတာချင်း မတူညီအောင်၊ ဒီနေ့ကုိုယ်ဟာ ဒီလောက်ပဲ ပြုပြင်နုိုင်သေးရင် မနက်ဖြန်ကုိုယ်ဟာ ဒီထက်ပုိုပြီး အကောင်းဘက်ကုို ပြုပြင်နုိုင်အောင် ပြိုင်ဆုိုင်ကြည့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကုိုယ့်စိတ်နဲ့ ကုိုယ့်အမူအရာတွေကုို အကောင်းဘက်ကုို ဦးတည်စေတဲ့ ပြိုင်ဆုိုင်မှု၊ ကုသုိုလ်ဘက်ကုို ဦးတည်နေတဲ့ ပြိုင်ဆုိုင်မှုတွေနဲ့ ကြိုးစားလေ့ကျင့်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလုို တစတစ ကုိုယ့်ကုိုယ်ကို သတိတရနဲ့ ပြုပြင်နုိုင်အောင် ပြိုင်ဆုိုင်နုိုင်ခြင်းဟာ ကုိုယ့်ဘဝရဲ့ ပစ္စုပ္ဗန် သံသရာ နှစ်ဖြာတုိုးတက်ရေးအတွက် အကောင်းဆုံးပြိုင်ဆုိုင်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
။ အချိန် 9/20/2012 08:16:00 PM
“ဘုရားဖက်တော့ အသက်ရှည်၊ တရားဖက်တော့ အမျက်ပြေ၊ သံဃာဖက်တော့ အခက်ဝေ”
ဆိုတဲ့ ရတာနာသုံးပါး ကုိုးကွယ်ရခြင်း အကျိုးဆက်တွေမှာ အားလုံးဟာ တကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာပဲ ခံစားနိုင်တဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် “တရားဖက်တော့ အမျက်ပြေ” ဆိုတဲ့ စကားကတော့ မကျေနပ်မှုတွေ၊ အလုိုမကျမှုတွေ၊ အမျက်ဒေါသတွေ ဖြစ်တိုင်း ဘုရားစကား၊ တရားအားကို အာရုံပြုမိတဲ့ သူတွေအနေနဲ့ လက်တွေ့ ပြေပျောက်သွားကြတာဟာ အမှန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရားရှင် မိန့်တော်မူတဲ့ လမ်းညွှန်တွေထဲမှာ ကုိုယ်နှုတ်စိတ် သုံးမျိုးလုံး သတိထားပြီး ပြုမူပြောဆုိုကြံစီကြဖုို့ ဆုိုတဲ့အချက်ဟာ အထူးပြုထားတဲ့ လမ်းညွန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သတိလွတ်သွားရင် စိတ်ဆုိုးတာတုို့၊ စိတ်တုိုတာတုို့၊ အလုိုမကျတာတုို့၊ မကျေနပ်တာတုို့၊ မနာလိုတာတုို့၊ ဝန်တုိုတာတုို့ စသဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာပြီး အဲဒီစိတ်တွေနဲ့ပဲ ကုိုယ့်မှာ ပူလောင်ခံစားနေကြရတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီစိတ်တွေ မဖြစ်ပေါ်အောင် သတိနဲ့ ပြောဆုိုနေထုိုင်လုပ်ကုိုင် ကြံစီကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပုထုဇဉ် သဘာဝ စိတ်ဆိုတာကို ထပ်ကြပ်မကွာ လုိုက်ပြီးထိန်းသိမ်းဖုို့ ဆုိုတာ မလွယ်လှတဲ့အတွက် ပထမဆုံး အချက်အနေနဲ့ သတိမလွတ်အောင်ထိန်းပြီး စိတ်မှာ မကောင်းတဲ့ အကြံအတွေးတွေ မပေါ်လာအောင် ထိန်းသိမ်းကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထိန်းသိမ်းနေတဲ့ကြားကမှ စိတ်မှာပေါ်ပေါ်လာနေတယ်ဆိုရင်တော့ နှုတ်နဲ့လက်တွေ့ လွန်ကျူးသွားတဲ့ အထိမရောက်အောင် ဆက်ပြီးထိန်းသိမ်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလုို ထိန်းသိမ်းနေတဲ့ကြားက ပါးစပ်နဲ့ လက်တွေ့ပြောဆုို ကျူးလွန်မိတဲ့အထိ ဖြစ်သွားရင်လည်း ကုိုယ်ထိလက်ရောက် ကျူးလွန်မိတဲ့အထိ မဖြစ်အောင် နောက်ဆုံးအဆင့် အနေနဲ့ ထိန်းသိမ်းကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလုို ထိန်းသိမ်းကြည့်ခြင်းဟာ ကိန်းနေတဲ့ ကိလေသာ၊ တုိုက်ဆုိုင်ရင် ပေါ်လာတတ်တဲ့ ကိလေသာ၊ ကျူးလွန်တဲ့အဆင့်အထိ ရောက်သွားတတ်တဲ့ ကိလေသာတွေကို ကုိုယ်သန္တာန်မှာ သတိကပ်ပြီး တစ်ဆင့်ချင်း ထိန်းသိမ်းနေထုိုင်ကြည့်တဲ့ သဘောပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အားလုံးသိတ်တဲ့အတုိုင်း စိတ်ဆိုတာက အလွန်ထိန်းဖုို့ ခက်တဲ့အတွက် အစအဆုံး မထိန်းသိမ်းနုိုင်တာတောင်မှ ထိန်းလုို့ရတဲ့ အဆင့်မှာ၊ ထိန်းလို့ရတဲ့အချိန်မှာ ချက်ချင်းထိန်းလုိုက်နုိုင်အောင် ကြိုးစားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မဟုတ်ရင် ကောင်းတဲ့စိတ်တွေ ပြန်ဝင်လာဖုို့၊ ဝင်လာရင်လည်း ထိန်းသိမ်းနုိုင်ဖုို့ အတော်မလွယ်လှတာ ဖြစ်ပါတယ်။
စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး “အရာရာမှာ စိတ်ကဦးဆောင်၊ စိတ်ကဖန်တီး၊ စိတ်ကကြီးမှုပြီး စိတ်နဲ့သာပြီး စေတဲ့အတွက် အဲဒီစိတ်ကို သတိကပ်ပြီး မမေ့မလျော့ မပေါ့မဆဘဲ ထိန်းသိမ်းနုိုင်အောင် ကြိုးစားကြရမှာ ဖြစ်ကြောင်း” စသဖြင့် မိန့်တော်မူထားတဲ့ မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ မိန့်မှာတော်မူချက်များကုို ဘုရားတရား အတော်များများမှာ ထုတ်နှုတ်မှတ်သား ကောက်ချက်ချထားနုိုင်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလုို ဟုိုဟုိုဒီဒီတွေမှာ အကြောင်းတုိုက်ဆုိုင်ရင် တုိုက်ဆုိုင်သလို ဟောကြားတော်မူထားတဲ့ ဘုရားတရားတော်များ အထင်အရှား ရှိနေတဲ့အတွက် ကုိုယ့်စိတ်မှာ တစ်ခုခု ဖြစ်ရင် ဒီတရားတော်တွေကုို ဖတ်ကြားနာယူမှတ်သားရင်း လက်တွေ့အသုံးချ နုိုင်တဲ့သူတွေဟာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ဒုက္ခခံစားချက်၊ အမျက်ရမက် စတာတွေကုို ဖြေလျော့သွားနုိုင်ကြတော့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကကတော့ တရားတော်အပေါ်မှာ နာယူနုိုင်တဲ့နားနဲ့ တရားစကားတွေကို လက်တွေ့လုိုက်နာ ကျင့်သုံးနုိုင်တဲ့ အားတွေ ရှိနေဖုို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီလုို သူတော်ကောင်းစိတ်နဲ့ သဒ္ဓါနား၊ သဒ္ဓါအားတွေ ရှိပြီး ဓမ္မတရားတော်တွေကုို တကယ်နာယူမှတ်သား နုိုင်မယ်ဆုိုရင် သေချာပါတယ် အမျက်ပြေရုံတင်မက အခက်ပါဝေပြီး အသက်လည်း ရှည်နေကြမှာ အမှန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိပ်ပင် ရေလောင်းမှုမျိုးတော့ မဖြစ်သင့်ပေ
။ အချိန် 9/18/2012 11:08:00 AM
တစ်ခါက ဒကာမကြီးတစ်ယောက်နဲ့ တွေ့တော့ အလှူဒါနအကြောင်း၊ အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်း စကားစပ်ပြီး ပြောဖြစ်ကြပါတယ်။ “အလှူဒါနဆုိုတာ စေတနာပြတ်ရင် ဘယ်လုိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကုိုပဲ လှူလှူ အကျိုးတရားကတော့ ရနေကြောင်း၊ ဒါပေမယ့် အလှူခံ ပုဂ္ဂိုလ်ကုိုလုိုက်ပြီး အကျိုးအကြီးအသေးတော့ ကွာခြားကြောင်း” ဘုန်းဘုန်းက ပြောဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒကာမကြီးကလည်း သူဘယ်လုို လှူဖြစ်တဲ့အကြောင်း၊ ဘယ်လောက်လှူဖြစ်ကြောင်း ဘယ်လုိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကုို လှူဖြစ်ကြောင်း ပြောပြရင်း နောက်ဆုံး သူပြောတဲ့ စကားက “တပည့်တော်မကတော့ သံဃာဆုိုရင် သင်္ကန်းပတ်ထားရင် ပြီးရော ဘယ်လိုသံဃာမျိုးဖြစ်ဖြစ် လှူလုိုက်တာပဲ ဘုရား”ဆုိုတဲ့ အချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ဘုန်းဘုန်းက “ကောင်းပါတယ် ဒကာမကြီး အဲဒီလုို သံဃာကုိုရည်မှန်းပြီး လှူဒါန်းတာ အမတန်ကုို အကျိုးကြီးပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဒကာမကြီးရေ ဒီနေ့ခေတ်မှာ၊ အထူးသဖြင့် ထေရဝါဒ ဓမ္မကုို အားကောင်းအောင် မနဲရုန်းနေရတဲ့ ဘုန်းဘုန်းတုို့လုို ထေရဝါဒ နုိုင်ငံမျိုးမှာ သံဃာဆုိုပြီးရော ဘာဖြစ်ဖြစ် လှူလုိုက်တဲ့ ပုံစံမျိုးတော့ အခြေအနေအရ မဖြစ်သင့်လှပါဘူး၊ အလှူရှင်တွေ အနေနဲ့ စေတနာပြတ်ရင် ဒါနက မြတ်လှပေမယ့် သာသနာ အားနည်းလာနေတဲ့ အခုလုို ကာလမျိုးမှာ သာသနာကုို ခုတုံးလုပ်ပြီး လုပ်စားနေကြတဲ့ သင်္ကန်းခြုံ လုပ်စားတွေကို ပေးကမ်းလှူဒါန်း ချီးမြှောက်မှုမျိုးကတော့ အဆိပ်ပင် ရေလောင်းသလုိုမျိုး ဖြစ်တတ်တဲ့အတွက် ဒီအပုိုင်းမှာတော့ ဒကာမကြီးတုို့လုို သဒ္ဓါတရား ကောင်းတဲ့သူတွေ အနေနဲ့ အလှူခံ ပုဂ္ဂိုလ်ကုို ရွေးချယ်ပြီး လှူအပ်တဲ့ နေရာမျိုးတွေမှာ လှူနုိုင်အောင် ကြိုးစားသင့်ပါတယ်” စသဖြင့် သာသနာအရေးတွေးလုို့ အကြံလေးတွေ ပေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်။ ဘုန်းဘုန်းတုို့ ဒီနေ့ခေတ် သာသနာဟာ အပြင်ကကြည့်တော့ သာသာယာယာလေးတွေ ရှိလှပေမယ့် အတွင်းမှာတော့ အနည်းငယ် ခြစားလာနေတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သာသနာကုို ခုတုံးလုပ်ကာ လုပ်စားနေကြတဲ့ သင်္ကန်းဝတ်ထားတဲ့ သာသနာအလုပ် မလုပ်သူတွေဟာ သာသနာတော်တွင်းကုို အမျိုးမျိုး ဝင်ရောက်နေရာ ယူလာတာတွေကြောင့် သာသနာတော်မှာ အားနည်းချက်တွေ၊ ထောက်ပြစရာတွေ၊ ဝေဘန်စရာတွေ တစတစ များပြားလာနေတော့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သဒ္ဓါပညာ တရားတွေ ယုတ်လျော့လာနေတဲ့ ခေတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်လည်း သာသနာတော်ကုို သဒ္ဓါနဲ့ ကြည်ညိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များ နည်းပါးလာပြီး သာသနာတော်ကို ခုတုံးလုပ်ကာ အနေအစားချောင်လို့ ဝင်လာကြသူတွေ များလာကာ ကိုယ်အနေအစားချောင်ရင်ပြီးရော သာသနာဘာဖြစ်ဖြစ်၊ သံဃာအများစု ဘာဖြစ်ဖြစ် ထည့်မတွက်ကြတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်း တွေ့လာနေရတော့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုဆိုးတာက အဲဒီလို ပုဂ္ဂိုလ်တွေက သာသနာပြု နေပါတယ်လို့ ဂုဏ်ဖော်၊ ဘုရားတရားတော်တွေကို လိုသလို ပုံဖော်ပြီး ဘုရားသာသနာကို ခုတုံးလုပ်၊ ကိုယ့်အတွက် မဟုတ်တရုတ်တွေ လုပ်နေကြတဲ့ အချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ချို့ဆိုရင် အခြေအနေအရ ဝင်လာကြတဲ့ အခြေအနေ ပဗ္ဗဇ္ဇိတတွေ ဖြစ်နေကြတဲ့အတွက် စာလည်းမတတ်၊ တရားလည်း မကျင့်ဘဲ လာဘ်လာဘ ရရေးကို ဦးစားပေးပြီး သာသနာ့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ မအပ်စပ်တဲ့ အသက်မွေးမှုတွေနဲ့ ပညာအားနည်းလှတဲ့ ဒကာဒကာမတွေအပေါ်မှာ လွဲချော်အောင် လုပ်နေကြတာတွေလည်း ရှိနေပြန်ပါတယ်။ ဗေဒင်လေးဟောပေးလိုက်၊ ချဲဂဏန်းလေးပေးလိုက်၊ ယတြာလေးချေပေးလိုက်၊ ငွေးတိုးလေးချေးပေးလုိုက် စသဖြင့် လူအကြိုက်လုိုက်ကာ သာသနာကုို ခုတုံးလုပ်ပြီး သာသနာပြုနေပါတယ်လုို့ ဆုိုနေကြသူတွေကလည်း အများကြီးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ခက်တာက အဲဒီလုို ပုဂ္ဂိုလ်တွေကုိုမှ တကယ့် သာသနာပြု သူတော်ကောင်းတွေလုို့ ထင်ပြီး ရက်ရက်ရောရော ပေးလှူနေကြတဲ့ ပညာအားနည်းလှတဲ့ ဒကာဒကာမတွေကလည်း ရှိနေပြန်လေတော့ ပြောသာပြောရတယ် ဘုန်းဘုန်းတုို့က မနာလိုလုို့ ပြောတယ်ထင်သူတွေက ရှိကောင်းရှိနေနုိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လုိုပဲဖြစ်ဖြစ် ပြောသင့်တာတော့ ပြောရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တမ်းကျတော့ သာသနာ တကယ်ပြုနေကြတဲ့ သာသနာ့ဝန်ထမ်းတွေဟာ ပရိယတ္တိ စာသင်တုိုက်တွေနဲ့ ပဋိပတ္တိ ရိပ်သာတွေမှာ အများကြီးပဲ ရှိနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည် သာသနာကုိုကြည့်ရင် ဒီနေ့အချိန်အထိ မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ ဓမ္မတွေ တသွေမသိမ်း ထိန်းသိမ်းထားနေနုိုင်ခြင်းဟာ ပရိယတ္တိက အားကောင်းနေလုို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ သာသနာမှာ အခြေခံဖြစ်တဲ့ ပရိယတ်အားကောင်းနေတဲ့အတွက် ကျင့်ကြံအားထုတ်မှု ပဋိပတ်ဟာလည်း ပြောင်းလဲမှုမရှိ တည်တံ့နေကာ ပဋိပတ်သာသနာ မှန်ကန်နေတဲ့အတွက်လည်း ပဋိဝေဓဆုိုတဲ့ အကျိုးသာသနာက ရှိနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ အခြေခံ ပရိယတ်သာ အားနည်းလာမယ်ဆုိုရင် မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ ဓမ္မအဖြာဖြာဟာလည်း တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကွယ်ပျောက်လာတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ပရိယတ်ဝန်ဆောင် သာသနာပြု ခေါင်းဆောင်တွေဟာ သာသနာအတွက် တကယ့်ကုို အရေးကြီးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍမှာ ရှိနေကြရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
သာသနာပြုလုို့ ပြောရင် ဒီလုို ပရိယတ်၊ ပဋိပတ်ဝန်ဆောင်တွေကသာ အစစ်အမှန် သာသနာပြုတွေလုို့ ပြောရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သာသနာကုို တကယ်ချီးမြောက်ချင်တယ်ဆုိုရင် ဒီလုိုအရှင်တွေကို ပုိုပြီးချီးမြှောက် ထောက်ပံ့ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခုတော့ အဲလုိုမဟုတ်။ သာသနာ အလုပ်မလုပ်တဲ့ သူတွေကုို အဟုတ်လုပ်ပြီး ထောက်ပံ့တဲ့ အလုပ်တွေ လုပ်နေကြတဲ့အတွက် တကယ်သာသနာပြု အရှင်တွေမှာ ပစ္စည်းလေးပါးအပိုင်းမှာ ဆင်းရဲချို့တဲ့ နေကြတော့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ စာသင်တုိုက်မှာ အပင်ပန်း အဆင်းရဲခံပြီး စာဝါပုို့ချနေကြတဲ့ စာချဘုန်းကြီးတွေမှာ တစ်နှစ်နေလုို့ သင်္ကန်းသုံးစုံ ပြည့်စုံအောင် မရနုိုင်ကြတာတွေ ရှိနေပေမယ့် ဗေဒင်ဟော၊ လက္ခဏာကြည့်၊ ချဲ့ဂဏန်းပေးတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတော့ သင်္ကန်းတွေ ရာနဲ့ချီကာ ပုံနေတော့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းတွေဆုိုလည်း ရွှေကျောင်းငွေကျောင်း စသဖြင့်ပေါ့။ မနာလုိုလုို့ ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ သာသနာအတွက် အားမလုို အားမရဖြစ်လုို့ ပြောနေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်ဖြစ်သင့်တာက သာသနာကုို တကယ်ချီးမြှောက်ထောက်ပံ့ချင်ရင် အဲဒီလုို ပင်ပင်ပန်းပန်း ဆင်းဆင်းရဲရဲနဲ့ သာသနာပြုနေကြတဲ့ ပရိယတ်ဝန်ဆောင် စာသင်တုိုက်က အရှင်မြတ်များကုို အများကြီးအားပြုကာ ထောက်ပံ့ပေးကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပဋိပတ်ရိပ်သာမှာ ရှိနေကြတဲ့ သာသနာပြု အရှင်သူမြတ်များဟာလည်း သာသနာကုို အမှန်တကယ်ပြုနေကြတဲ့ အရှင်မြတ်များဖြစ်ပေမယ့် ရိပ်သာတွေမှာကတော့ ဒကာဒကာမများ ကုိုယ်တုိုင်ပါဝင် အားထုတ်ကာ သံဃာတော်များနဲ့ နီးစပ်ခွင့်ရနေကြတဲ့ အတွက် ပရိတ်ယတ်ဝန်ဆောင် အရှင်မြတ်များထက်စာရင် ပစ္စည်းလာဘ်လာဘက ပုိုပြီးပြည့်စုံလှပါတယ်။ မရှိတာက ပရိယတ်ဝန်ဆောင် အရှင်မြတ်များဖြစ်ပါတယ်။ ပုိုပြီးရှိနေတာက ပရိတ်ယတ်လည်းမဟုတ်၊ ပဋိပတ်လည်း မလုပ်တဲ့ မအပ်တဲ့နည်းတွေနဲ့ သာသနာကုို ခုတုံးလုပ်ကာ လုပ်စားနေကြတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ထောက်ပံ့တဲ့သူတွေကလည်း အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကုိုပဲ ပုိုပြီးထောက်ပံ့လှူဒါန်းနေကြလေတော့ တကယ်အလုပ်အလုပ်နေကြတဲ့ သာသနာပြုများမှာ အားနည်းလာပြီး ခုတုံးလုပ်သာသနာပြုတွေက ပုိုပြီးအားကောင်းလာကာ ကြာရင် အဆိပ်ပင်ရေလောင်း ဖြစ်လာကြတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြောချင်တာက လှူတာက ကောင်းပေမယ့် လှူတဲ့အခါ ခေတ်ကာလအနေအထားအရ ပုဂ္ဂိုလ်ကုို ရွေးချယ်ပြီး တကယ်လုိုအပ်တဲ့၊ တကယ်သာသနာပြုနေတဲ့ အရပ်တွေမှာ လူဒါန်းတာက သာသနာအတွက်လည်း အကျိုးရှိ အလှူအတွက်လည်း အကျိုးရှိပြီး အဆိပ်ပင် ရေလောင်းမှုတွေကနေ ရှောင်ကြဉ်နုိုင်ကြောင်း ပြောချင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်္ကန်းဝတ်ထားရင်ပြီးရော ဆုိုပြီး ရက်ရက်ရောရော လှူဒါန်းတာဟာ လှူတဲ့သူအတွက် စေတနာပြတ်ရင် ဒါနဟာ မြတ်ပေမယ့် အလှူခံ ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တော့ သာသနာမှာ လုပ်ချင်ရာလုပ်ဖုို့ အားပေးအားမြောက်ပြုရာ ရောက်တဲ့အပြင် သူတုို့လုပ်နေတဲ့ မအပ်စပ်တဲ့ အလုပ်တွေမှာ ပုိုပြီးအားကောင်းစေရာ ရောက်တာကြောင့် ဒါမျိုးကတော့ အဆိပ်ပင် ရေလောင်းတဲ့ သဘောမျိုး သက်ရောက်နေတဲ့အတွက် ဒီလုိုမျိုး အလှူတွေကုို အတတ်နုိုင်ဆုံး ဆင်ခြင်ပြုပြင်ကြဖုို့ အသိပေးလုိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အားနည်းလာတဲ့ သာသနာတော်မှာ ဆရာနဲ့ ဒကာ အတူလက်တွဲပြီး ဆရာလည်း ဆရာအလုပ်လုပ်၊ ဒကာလည်း ဒကာအလုပ်လုပ်ကာ ညီညီညာညာ သာသနာပြုကြမှ မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ သာသနာတော်ကြီးဟာ အရှည်ခန့်၍ တည်တံ့နုိုင်မယ်ဆုိုတာ သိစေလုိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် အလှူဒါန လုပ်ရတဲ့အပေါ်မှာ သဒ္ဓါတရား အားကောင်းလှတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ သူတော်စင်များအနေနဲ့ အလှူဒါန ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာ ခေတ်ကာလ အနေအထားအရ သဒ္ဓါတရားကုို ပညာလေးနဲ့တွဲပြီး အမှန်တကယ် သာသနာပြုနေတဲ့ သံဃာနဲ့ အစစ်အမှန် လုိုအပ်နေတဲ့ နေရာမှာတွေမှာ ရွေးချယ်ပြီး လှူဒါန်းနိုင်အောင် ကြိုးစားကြဖုို့နဲ့ သာသနာကုို ခုတုံးလုပ်ကာ သာသနာနဲ့ မအပ်စပ်တဲ့ အလုပ်တွေမှာ အသက်မွေးမှု ပြုနေကြတဲ့ သာသနာပြုအမည်ခံတွေကို ချီးမြှောက်ထောက်ပံ့ကြတဲ့ အဆိပ်ပင်ရေလောင်းတဲ့ အလုပ်တွေမှာ ရှောင်ရှားကြဖုို့ တုိုက်တွန်းရင်း ဆရာဒကာ ညီညွတ်စွာ ဘုရားသာသနာ အရှည်ကြာအောင် ကြိုးစားကြဖုို့ အထူးမေတ္တာရပ်ခံ တင်ပြအပ်ပါတယ်။
။ အချိန် 9/14/2012 07:37:00 AM
“သဒ္ဓါလွန်ရင် တဏှာကျွန် ဖြစ်တတ်တယ်”တဲ့။ ဟုတ်ပါတယ်။ လွန်လာရင် ဘာမှမကောင်းလှပါဘူး။ လွန်ရင်ကျွံတတ်ပြီး ကျွံရင်တော့ နွံနစ်ဖို့ပဲ များသွားတတ်ပါတယ်။ သဒ္ဓါဆိုတဲ့ ယုံကြည်မှု၊ ကြည်ညိုမှုဟာလည်း ဒီအတိုင်းပါပဲ။ သဒ္ဓါတရားဆိုတဲ့ ယုံကြည်မှု၊ ကြည်ညိုမှုဟာ ဉာဏ်မပါရင် အကြည်ညိုလွန်သွား၊ ယုံကြည်မှု လွန်သွားကာ အမှားဘက်ကို ရောက်သွားတတ်ပါတယ်။ အမှားပါရင် တရားမပါဘဲ တဏှာနယ်ထဲကို ရောက်သွားစေတတ်ပါတယ်။
သဒ္ဓါဆိုတဲ့ ယုံကြည်မှုဟာ ပညာမပါရင် အလွဲတွေကို ယုံကြည်မိတတ်ကြပါတယ်။ တစ်ချို့ဆုိုရင် ကုိုယ်ပုိုင်စဉ်းစားတတ်တဲ့ ဉာဏ်မပါတော့ ဟိုလူပြောလည်းယုံ၊ ဒီလူပြောလည်းယုံ၊ ဟိုနေရာဆိုလည်းရောက်၊ ဒီနေရာဆုိုလည်းရောက်၊ ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ဆုိုလည်း ကိုးကွယ်၊ ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆုိုလည်း ကုိုးကွယ် စသဖြင့် လိုက်လုပ်မိရာက မကိုးကွယ်သင့်တာ၊ မဆည်းကပ်သင့်တာတွေကုို ကုိုးကွယ်ဆည်းကပ်မိပြီး နောက်တော့ အဲဒီ ယုံကြည်မှုအလွဲ၊ ယုံကြည်မှု အစွဲတွေကနေ ရုန်းမထွက်နုိုင်အောင်ဖြစ်ကာ လွဲပြီးရင်းလွဲနေကြတော့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
သဒ္ဓါတရားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တစ်ချို့က ပထမတော့ တကယ်ကြည်ညိုတာပါပဲ။ နောက်တော့ အဲဒီကြည်ညိုမှုကနေပြီး တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကို စွဲလာတာတုို့၊ အသံကုို စွဲလာတာတုို့၊ အဟောအပြောကုို စွဲလာတုို့ စသဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာကာ ရဟန်းတော်ဆုိုရင်လည်း သူ့ရဟန်း၊ သူ့ဘုန်းကြီး၊ သူ့ကုိုယ်တော် စသဖြင့် သူပုိုင်လုပ်လာကာ သူ့ကုိုပဲ ဦးစားပေးမှ၊ သူပဲ ချည်းကပ်ရမှ၊ သူပဲ အနီးကပ်နေရမှ ဆုိုတာတွေ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပြင် သူများတွေအပေါ် အရေးပေးရင်လည်း မနာလုိုစိတ်၊ မကျေနပ်စိတ်တွေအထိ ဖြစ်ပေါ်လာတော့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တော့ သူ့အလုိုအတုိုင်း မဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်း အမုန်းတရားနဲ့ အငြိုးထားတဲ့အထိ ဖြစ်လာကာ အပုတ်ချတာတွေအထိ လုပ်လာကြတော့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အရင်းစစ်တော့ သဒ္ဓါတရားနောက်မှာ ပညာအားတွေ မကပ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ သဒ္ဓါလွန်လာတာတွေဖြစ်ပြီး အဲဒီနောက်မှာ တဏှာဆုိုတာတွေအထိ ရောက်ကုန်တော့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သဒ္ဓါနဲ့ ပညာကုို မညှိနုိုင်တဲ့အခါကျတော့ သဒ္ဓါကလွန်ပြီး ပညာမပါဖြစ်ကာ အလွဲတွေဖြစ်ကုန်တဲ့ သဘောပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလုိုဖြစ်လာတာဟာ သတိတရား အားနည်းခြင်းကြောင့်လုို့လည်း ပြောနုိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သတိက သဒ္ဓါနဲ့ ပညာကုို ညီမျှအောင် ညှိသွားမယ်ဆုိုရင် သဒ္ဓါလွန်ပြီး တဏှာကျွန်အဖြစ် ရောက်သွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒါကြောင့် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကြည်ညိုရာကနေပြီး ပုိုင်ဆုိုင်လုိုတဲ့အထိ ချည်နှောင်မှု မဖြစ်ရအောင် ကြည်ညိုမှုနောက်မှာ အစွဲမပါသွားဖုို့ သဒ္ဓါနဲ့ ပညာကုို ညီမျှအောင် သတိဆောင်ပြီး ထိန်းသိမ်းကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
။ အချိန် 9/10/2012 08:01:00 AM
တစ်နေ့က နိုင်ငံခြားမှာ ရောက်နေတဲ့ အရင်းနှီးဆုံး ဒကာမတစ်ယောက်နဲ့ အွန်လုိုင်းမှာ တွေ့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ တွေ့တွေ့ချင်းသူက “အရှင်ဘုရား မကျိန်းသေးဘူးလားဘုရား၊ တပည့်တော်တုို့ဆီမှာ သန်းခေါင်ကျော်လုို့ (၁)နာရီတောင် ထုိုးပြီးသွားပြီဘုရား” ဆုိုပြီးမေးရင်း နှုတ်ဆက်စကားပြောလာပါတယ်။ ဘုန်းဘုန်းလည်း အတော်အံ့သြသွားတယ်။ “အင်… ဒကာမရေ ဘုန်းဘုန်းက မအိပ်သေးတာမဟုတ်ဘူး၊ အိပ်ပြီးလုို့ အရုဏ်တောင် ဘုဉ်းပေးပြီးသွားပြီ”လုို့ ပြန်ပြောတော့မှ “OH MY BUDDHA”လုို့ဆုိုကာ သူ့ကုိုယ်သူ ဘုရားတပါတယ်။ ဒါနဲ့ ဘုန်းဘုန်းကပဲ “ ဒကာမက ခုချိန်ထိ မအိပ်သေးဘဲ ဘာလုပ်နေတာလဲ”လုို့ ထပ်ပြီးမေးလုိုက်တော့ “တပည့်တော် အိပ်မရလုို့ဘုရား၊ စိတ်ဖိစီးမှုတွေက အရမ်းများပြီး အလုပ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဖိအားတွေနဲ့ အိပ်လုို့မရဘူးဘုရား၊ တပည့်တော်မလေ တစ်ခါတခါ ကုိုယ့်ကုိုယ်ကုို ဒီဘဝမှာ နေတောင်မနေချင်လောက်အာင်ကုို ဖြစ်ရပါတယ်ဘုရား” စသဖြင့် ပြန်ပြောလာပါတယ်။ ဒကာမရဲ့ ခံစားချက်အတွက် ကုိုယ်ချင်းစာမိသလုို ဒီခံစားချက်တွေ သက်သာအောင် ဘုန်းဘုန်းလည်း တတ်နုိုင်သလောက် အားပေးစကား၊ အားပေးတရား ဟောဖြစ်ခဲ့ရပါသေးတယ်။
ဒါက ဘုန်းဘုန်းနဲ့ နီးစပ်သူတွေရဲ့ လက်တွေ့ခံစားချက်လေးတွေအကြောင်း တစေ့တစောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေမှာ ဘုန်းဘုန်းပြောချင်တာက အဲဒီဒကာမလုို ခံစားချက်တူ၊ စိတ်ဖိစီးမှု အပူတွေနဲ့ တငူငူဖြစ်နေကြတဲ့ သူသူငါငါ ပုဂ္ဂိုလ်အဖြာဖြာရဲ့ ခံစားမှုလေးတွေအကြောင်း၊ စိတ်ဖိစီးမှုလေးတွေ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်တယ်။ ဒီအကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အဲဒီဒကာမနဲ့ ပြောဖြစ်တုန်းက ဘုန်းဘုန်းက “ဘဝဒုက္ခဆုိုတာ ကုိုယ့်ကုိုယ်ကုို အဆုံးစီရင်လုိုက်လုို့ ပြီးသွားမယ်ဆုိုရင် ဒုက္ခကုိုယ်စီ ရှိနေကြတဲ့ သတ္တဝါအားလုံး ဒီလုိုပဲ လုပ်နေကြမှာပေါ့။ အရှင်ဘုရားတုို့ ကုိုယ်တုိုင်လည်း အဲဒီလုို ဖြေရှင်းမှာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဘဝသံသရာဆုိုတာ ဒီလုို မပြီးဘူးလေ။ ဒုက္ခဆုိုတာ ဒီဘဝရုပ်ရလုို့ ဖြစ်ရတာဆုိုပြီး ရုပ်အကောင်ကုို အဟုတ်ပြောင်အောင် အဆုံးစီရင်ပေမယ့် တကယ်မပြတ်သေးတဲ့ ကိလေသာတွေက နောက်ဘဝ နောက်ခန္ဓာမှာလည်း ဒီလုိုပဲ ထပ်ဖြစ်နေမှာဆုိုတော့ အဲဒီလုို ဘဝသစ်ဖြစ်တုိုင်း ကုိုယ့်ကုိုယ်ကုို အဆုံးစီရမယ်ဆုိုရင် ဆုံးမှာကုို မဟုတ်တော့ပါဘူး၊ တကယ်ဖြစ်သင့်တာက ဒုက္ခကုိုရင်ဆုိုင်၊ စိတ်ဖိစီးမှုကုို ယှဉ်ပြိုင်ပြီး ခံနုိုင်ရည်ရှိအောင် ကြိုးစားနေထုိုင် လေ့ကျင့်ဖုို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်” စသဖြင့် အားပေးနှစ်သိမ့် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
အမှန်တော့ စိတ်ဖိစီးမှု ဖြစ်တယ်ဆုိုတာ စိတ်ကအာရုံတွေရဲ့ ဆွဲရာကုို ပါသွားပြီး အဲဒီအစွဲတရားတွေမှာ လုိုက်ခံစားနေမိလုို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အာရုံဆုိုတာကလည်း သိတဲ့အတုိုင်းပဲ အဆင်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အသံပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အနံ့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အရသာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ အတွေ့အထိပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကောင်းရင်လည်းစွဲ၊ မကောင်းရင်လည်း စွဲနေတတ်တဲ့ သဘောရှိပါတယ်။ ဘယ်လုိုပဲဖြစ်ဖြစ် စွဲသွားတယ်ဆုိုရင် အဲဒီအစွဲဟာ ကုိုယ့်စိတ်ကုို သက်သောင့်သက်သာ ဘယ်တော့မှ ဖြစ်စေတဲ့ သဘောမရှိပါဘူး။ အစွဲရဲ့ သဘောက အစွဲများလေ အလွဲများလေပဲ ဖြစ်ကာ စွဲရာနောက်မှာ ခံစားမှုလည်း ရောက်လာနေတော့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလုို စွဲရာခံစားရာက ကုိုယ်မနှစ်သက်တဲ့အရာ၊ ကုိုယ်မကြိုက်တဲ့အရာ၊ ကုိုယ်သဘောမကျတဲ့ အရာတွေမှာ ခံစားမိတဲ့အခါ စိတ်မှာအနာရတဲ့အထိ ဖြစ်သွားတတ်တဲ့ သဘောပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးတယ်ဆုိုတာ တစ်နည်းအားဖြင့် ပြောရင်စိတ်အနာ ရသွားခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်မှာနာသွားပြီဆုိုရင် သတ္တဝါတွေဟာ ကျန်တဲ့အနာတွေထက်ကုို ပုိုပြီးခံစားရတော့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်းစစ်တော့ စိတ်ဖိစီးတယ်ဆုိုတာ အာရုံတွေရဲ့ စွဲရာနောက်ကုို စိတ်ကလုိုက်မိရာက အဲဒီအစွဲတရားက ကုိုယ့်စိတ်ကုို ပြန်ဖိစီးရင်း စိတ်ခံစားချက်ဖြစ်ကာ စိတ်မှာအနာရသွားခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုဆုိုတော့ အဲဒီစိတ်ခံစားမှု အစွဲတွေဟာ ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲလုို့ ဆုိုရင် မသိလုို့ ဖြစ်ကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အာရုံတွေ၊ အတွေးတွေ၊ ခံစားမှုတွေကို သတိနဲ့ယှဉ်ပြီး မသိတဲ့အတွက် အဲဒီမသိမှုက အစွဲတရားကို ဖြစ်ပွားစေတာဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ဆိုတဲ့သဘောက သိရင်စွဲစရာအကြောင်းမရှိဘဲ မသိလုို့ စွဲသွားကြခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆုိုကြပါစုို့။ အသံဆုိုတဲ့ အာရုံတစ်ခုခုကုို အသံဆုိုတဲ့ သဘောသဘာဝလုို့ မသိတဲ့အခါကျတော့ အဲဒီအသံပေါ်မှာလုိုက်စွဲသွားပြီး ကောင်းတဲ့အသံ၊ မကောင်းတဲ့အသံ၊ ကြိုက်တဲ့အသံ၊ မကြိုက်တဲ့ အသံ၊ ချီးမွန်းသံ၊ ကဲ့ရဲ့သံ စသဖြင့် ခံစားမိသွားတော့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခံစားမိပြီဆုိုရင် ကောင်းရင်လုိုချင်မှုတွေဖြစ်ပြီး မကောင်းရင် မလုိုချင်မှုတွေ ဖြစ်စေကာ လုိုချင်တဲ့သဘော၊ မလုိုချင်တဲ့ သဘောဆုိုတာ လောဘ၊ ဒေါသရဲ့ သဘောတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသဘောအတိုင်းပဲ စိတ်ဖိစီးမှု ဖြစ်တယ်ဆုိုတာဟာလည်း အာရုံအပေါ်မှာ စွဲလန်းမိရာက အဲဒီအစွဲကို မသိဘဲ လိုက်ခံစားရာက ဒီခံစားချက်က ကုိုယ့်စိတ်ကုို ပင်ပန်းစေကာ ဖိအားတွေဖြစ်သွားခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်းစစ်တော့ အားလုံးဟာ မသိလုို့ စွဲကြတော့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုတော့ကား အာရုံနောက်ကို စိတ်ကလုိုက်မိရာက ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ခံစားချက် အစွဲတရားကြောင့် စိတ်မှာဖိအားတွေ၊ အနာတွေ ဖြစ်လာကြတဲ့ သဘောမှာ ဒီဖိအားတွေက ရုန်းထွက်နုိုင်အောင် အမြန်ဆုံး ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပုထုဇဉ် သဘာဝ မသိလုို့ စွဲကြတာ၊ ခံစားကြတာတွေဟာ ဖြစ်တတ်ပေမယ့် ဒီသဘောကုို သိလာရင်တော့ အဲဒီဖိအားတွေ၊ ခံစားမှုတွေကနေ သက်သောင့်သက်သာ ဖြစ်အောင်တော့ လေ့ကျင့်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးလုို့ ဒုက္ခဖြစ်လုို့ဆုိုပြီး ရုန်းမထွက်ဘဲ ဒီအတုိုင်း လုိုက်ပြီးခံစားနေမယ်ဆုိုရင်တော့ အဲဒီခံစားမှုက ကြာရင်ကုိုယ့်ကုို အနုိုင်ယူသွားမှာ အမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီဖိအားတွေ၊ ခံစားမှုတွေကနေ အမြန်ရုန်းထွက်ကြည့်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရုန်းထွက်ကြမယ်ဆုိုတော့ အကောင်းဆုံးနည်းက တရားသဘောနဲ့ ဖြေဆည်ရာကုိုရှာရင်း ရုန်းထွက်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘဝမှာ လူတုိုင်းကြုံတွေ နေကြရတဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ ကုိုယ့်မှာကြုံတွေ့ ခံစားနေရပြီးဆိုရင် ကုိုယ့်ကုိုယ်ကုို အရင်ဆုံး ကုိုယ်လတ်သန့်ရှင်းပြီး တိတ်ဆိတ်ညိမ်သက်တဲ့ နေရာတစ်ခုခုကုို ရွေးချယ်ကာ သက်သောင့်သက်သာ ရှိတဲ့ ဣရိယာပုတ်နဲ့ မျက်လွှာလေးချပြီး ကုိုယ့်ရဲ့အမူအရာလေးကုို မြင်အောင်ကြည့်ကြည့်လုိုက်ပါ။ အဲဒီအခုိုက်အတန့်မှာ အရင်းတုန်းက ဘာပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့၊ စိတ်မှာဘယ်လုို ခံစားမှုမျိုးတွေ၊ ဖိအားတွေပဲ ရှိခဲ့ရှိခဲ့ မေ့ပစ်ထားလုိုက်ပါ။ ခန္ဓာကုိုယ်နဲ့ စိတ်ကုို သက်သောင့်သက်သာ ဖြစ်တဲ့ အနေအထားလေးနဲ့ ပြင်ဆင်ပြီး ဝင်လေထွက်လေလေးကို အရှိအတုိုင်းလေးပဲ လုိုက်သိနုိုင်အောင် သတိကပ်ထားပေးလုိုက်ပါ။ အဲဒီလုို လုိုက်ပြီးသိမှတ်နေတဲ့အခုိုက်မှာ သေချာပါတယ် အတွေးတွေ အများကြီးရောက်လာပါလိမ့်မယ်။ စိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့။ ဒါဟာ သမာဓိနည်းနေသေးလုို့ ဖြစ်တဲ့သဘောမျိုးပဲ ဖြစ်တဲ့အတွက် လွတ်သွားလုိုက်၊ ပြန်မှတ်လုိုက်၊ ပြန်သိလုိုက် စသဖြင့် ထပ်ခါထပ်ခါ ဝီရိယလေးတွေထားပြီး ကြိုးစားပွားများဖုို့ပါပဲ။ ဒါဆုိုရင် တဖြည်းဖြည်း သမာဓိလေးတွေ တည်လာပြီး စိတ်အဆင်လည်း ငြိမ်လာကာ ကြာတော့ ငြိမ်လာရာကနေ ကြည်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ကြည်လာရင် ခုနကဖြစ်နေတဲ့ စိတ်အစွဲဖိအားတွေ၊ ခံစားချက်တွေဟာလည်း အလုိုလုို ပျောက်ပျက်သွားတော့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကုိုယ့်အနေနဲ့ကတော့ သတိမလွတ်အောင် သိမှတ်နေဖုို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းအတုိုင်း စိတ်မှာဖြစ်ပေါ်လာသမျှ ခံစားချက်ကုို သတိကပ်ပြီး သိမှတ်ပေးနုိုင်ပြီဆုိုရင် သေချာပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုဆုိုတာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ လျော့နည်းသွားတော့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အချုပ်ပြောချင်တာက စိတ်ဖိစီးမှုတွေ၊ စိတ်ဒုက္ခတွေ ဖြစ်ကြတယ်ဆုိုတာ ကုိုယ့်စိတ်မှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အရာတွေကုို မသိလုို့ဖြစ်ပြီး မသိရာကနေ အာရုံတွေနောက်ကုို စိတ်ကလုိုက်မိကာ စွဲမိရာက ဖိတ်အားတွေဖြစ်၊ ခံစားချက်တွေဖြစ်ရင်း စိတ်မှာအနာလေးတွေ ဖြစ်သွားတဲ့ သဘောမျိုးပဲ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီလုိုဖိစီးမှုတွေ၊ ခံစားမှုတွေ မဖြစ်ရအောင် ကုိုယ့်ကုိုယ်ကုို သတိကပ်ပြီး ဘယ်သူကဘာပြောပြော၊ ဘယ်လုိုအသံပဲကြားကြား၊ ဘယ်လုိုအာရုံမျိုးပဲလာလာ လုိုက်ခံစားပြီး လုိုက်မစွဲဖုို့ပဲ ကြိုးစားရမှာဖြစ်ကြောင်း၊ အရာအားလုံးဟာ ခဏလေးဖြစ်ပေမယ့် စွဲနေသမျှ လွဲနေကြဦးမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီလုိုအလွဲ သံသရာမရှည်အောင် အားလုံးဟာ အချိန်တန်တော့လည်း ပြီးသွားမှာပါပဲလုို့ နှလုံးသွင်းကာ ခံစားမှုကုို ဖြေဆည်နုိုင်အောင် ကြိုးစားရမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ဒီလုိုဆုိုရင် စိတ်ဖိစီးမှုတွေဟာလည်း သက်သောင့်သက်သာဖြစ်ကာ ခံနုိုင်ရည် ရှိလာမှာဖြစ်ကြောင်း စသဖြင့် ပြောလုိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် အစွဲတရားကြောင့် အလွဲများကာ ဖိအားတွေအောက် စိတ်တွေရောက်ပြီး စိတ်မှာနာနေကြတဲ့ စိတ်ဝေဒနာရှင်တွေအနေနဲ့ ဒီဖိအားတွေ၊ ခံစားမှုတွေကနေ သက်သောက်သက်သာ ရုန်းထွက်နုိုင်ကြဖုို့ ကုိုယ့်စိတ်ကုို ပြန်မတ် စိတ်မှာ သတိကပ်ပြီး ဘယ်လုိုအာရုံမျိုးမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အစွဲတရားနဲ့ မခံစားမိအောင် ကြိုးစားပြီး ကုိုယ့်စိတ်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ခံစားမှု မှန်သမျှကုို ဖြစ်ပေါ်လာဆဲ အခုိုက်မှာ သိနုိုင်အောင် ရှုမှတ်ပွားများ နေထုိုင်ကြရမှာ ဖြစ်ပါကြောင်း စေတနာထား၊ မေတ္တာအားနဲ့ အသိစကား ပါးလုိုက်ရပါတယ်။
ဗုဒ္ဓသည် ဆင်းရဲကြောင်းတရား မဟောကြား
။ အချိန် 9/07/2012 04:04:00 AM
တစ်ချို့ ဗုဒ္ဓဘာသာကုို မလုိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေက ပြောကြတယ်။ မြန်မာနုိုင်ငံ ဆင်းရဲမွဲတေနေတာ ဗုဒ္ဓဘာသာကြောင့်တဲ့။ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကုိုးကွယ်တဲ့ နုိုင်ငံတွေကုိုကြည့်ရင် အားလုံးဟာ ဆင်းရဲတဲ့ နုိုင်ငံတွေချည်းပဲတဲ့။ ဒါကြောင့် ဆင်းရဲစေတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာကုို ကုိုးကွယ်မယ့်အစား ကမ္ဘာမှာ ချမ်းသာနေတဲ့ နုိုင်ငံတွေက ကိုးကွယ်ကြတဲ့ သူတုို့ဘာသာကုို ကုိုးကွယ်ပါဆုိုပြီး တစ်ချို့ ဘာသာခြားတွေက ပြောဆုိုစည်းရုံးကြပါတယ်တဲ့။ စည်းရုံးခံရတဲ့ ကလေးတွေရဲ့ ပြောစကားလေးတွေပါ။
ဒီလုို ပြောလာသူတွေကုို ဘာမှတော့ အထွေအထူး ပြောစရာမရှိပါဘူး။ ပြောဖုို့လည်း မလုိုပါဘူး။ သေချာတာကတော့ ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဟာ ဆင်းရဲကြောင်းတရား၊ ဆင်းရဲစေတဲ့ တရားကုို ဘယ်တုန်းကမှ ဟောကြားလမ်းညွန်မှု မရှိခဲ့ဘူးဆုိုတာပါပဲ။ ရှင်တော်ဗုဒ္ဓရဲ့ တရားတော်တွေဟာ သတ္တဝါတွေ ချမ်းသာရေးအတွက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သတ္တဝါတွေလုို့ ဆုိုတဲ့အတွက် ဗုဒ္ဓဘာသာကုို ကုိုးကွယ်ယုံကြည်တဲ့ သူတွေအတွက်သာ မဟုတ်ဘဲ ဘာသာမရွေး၊ လူမျိုးမရွေး အားလုံးသော သတ္တဝါတွေရဲ့ အရေးအတွက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီသတ္တဝါအားလုံး ချမ်းသာရေးတွေကုိုပဲ ဟောကြားတော်မူခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ချမ်းသာရေးလုို့ ဆုိုရာမှာလည်း ဒီဘဝ တစ်ခဏချမ်းသာစေမှုမျိုး မဟုတ်ဘဲ သံသရာ ဘဝါဘဝ ချမ်းသာရေးမှသည် ဘဝအဆုံး ချမ်းသာရေးအထိ အကုန်အစင် ဟောကြားတော်မူတာ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ခုတော့ ရှိပါတယ်။ ဗုဒ္ဓရဲ့ ချမ်းသာရေး လမ်းစဉ်ဟာ ရုပ်ပိုင်းဆုိုင်ရာ ချမ်းသာရေးထက်၊ စိတ်ပုိုင်းဆုိုင်ရာ ချမ်းသာရေးကုို ပုိုပြီးဦးစားပေးထားတဲ့ လမ်းစဉ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရုပ်မွဲလုို့၊ အသွင်အပြင်မွဲလုို့တော့ ဆင်းရဲတယ်၊ ဒုက္ခဖြစ်တယ်လုို့ သေချာပေါက် ပြောလုို့မရပါဘူး။ အသွင်အပြင် မွဲပေမယ့် အတွင်းစိတ်မှာ ချမ်းသာနေကြတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့ ဘဝဟာ အပြင်ပုိုင်းချမ်းသာပြီး အတွင်းစိတ်မှာ မချမ်းမသာ ဂယောင်ချောက်ခြား ဖြစ်နေကြတဲ့ သူတွေထက် အများကြီး ကွာခြားနေတယ်ဆုိုတာ လက်တွေ့ပုိုင်းနဲ့ ချိန်ထုိုးပြီး သိရှိနုိုင်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ ချမ်းသာရေးဟာ အသွင်အပြင် ချမ်းသာရေး မဟုတ်ဘဲ အနှစ်ရှိရှိ အတွင်းထိတဲ့ ချမ်းသာရေးမျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ တရားတော်များကုို လေ့လာကြည့်ရင် ဒီဘဝချမ်းသာရေး၊ နောင်သံသရာ ချမ်းသာရေးနဲ့ ဘဝအဆုံး ချမ်းသာရေး ဆုိုပြီး ချမ်းသာကြောင်းတွေကို အကျင့်တရားများနဲ့ ချိန်ထုိုးကာ ဟောညွန်ပြသထားတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလုို ချမ်းသာရေးကုို ဟောပြောတော်မူရာမှာလည်း ဆင်းရဲကြောင်း တရားတွေကုိုပါ ထုတ်နှုတ်ပြသတော်မူတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ ချမ်းသာရေး လမ်းစဉ်တွေကုိုကြည့်ရင် ဆင်းရဲကြောင်းဖြစ်တဲ့ မကောင်းတဲ့ ဒုစုရိုက် အမှုတွေကုို ရှောင်ရှားပြီး ချမ်းသာကြောင်း သုစရိုက်အကျင့်တွေကုို လုိုက်နာကျင့်သုံးရေး၊ မင်္ဂလာ တရားတော်နဲ့ အညီနေထုိုင်ရေး၊ လောကကျင့်ဝတ်၊ လူမှုကျင့်ဝတ်နဲ့ အညီ နေထုိုင်ကျင့်သုံးရေး၊ စီးပွားရေး ကြီးပွားရေးတွေကုို လုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာ ရှောင်သင့်တာတွေ၊ လုိုက်နာသင့်တာတွေကုို ကြိုးစားလုိုက်နာရေး စသဖြင့် ဒီဘဝမှာ လက်တွေ့ လုပ်ဆောင်ရမယ့် လမ်းညွန်ချက်များကုို လေ့လာတွေ့ရှိရမှာ ဖြစ်သလို သံသရာ ဘဝချမ်းသာရေးအတွက်လည်း သေပြီးနောက် အပါယ်မလားရေးအတွက် သီလကုို စောင့်ထိန်းကြရန်၊ အပါယ်ကလွတ်ပြီး သုဂတိဘဝမှာ ချမ်းသာရေးအတွက် ဒါနကုိုလည်း စွမ်းနုိုင်သမျှ ပြုလုပ်ကြရန်နဲ့ သံသရာက လွတ်မြောက်ပြီး သန္တိသုခ ဖြစ်တဲ့ ဘဝအဆုံး ချမ်းသာစေရေးအတွက်လည်း ဘာဝနာ အလုပ်ကုို ကြိုးစားပြီး ပြုလုပ်ကြရန် စသဖြင့် ဂိုက်လုိုင်းပေးထားတဲ့ ဟောပြောညွန်ကြားချက်များကုိုလည်း ဗုဒ္ဓပိဋကတ်တော်များမှာ လေ့လာတွေ့ရှိကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အထူးသတိပြုရမှာက ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာ ဆင်းရဲကြောင်းတရားကုို မဟောဘဲ ချမ်းသာကြောင်းတရားကုိုသာ ဟောကြားတော်မူတာ ဖြစ်ပေမယ့် ဒီဟောကြားချက်များဟာ မြတ်ဗုဒ္ဓက မှန်ကန်တဲ့ လမ်းကုိုညွန်ပြပေးချက် သက်သက်များပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မြတ်စွာဗုဒ္ဓဟာ ဘာလုပ်ပေးမယ်၊ ဘယ်လုိုကယ်တင်ပေးမယ်၊ ဘယ်လုိုချမ်းသာအောင် လုပ်ပေးမယ်ဆုိုတဲ့ ကတိပြုပြီး ကယ်တင်ပေး၊ ဖန်ဆင်းပေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်မြတ် မဟုတ်ဘဲ “ဒီလုိုလမ်းတွေရှိတယ်၊ ဒါတွေကုို လုိုက်နာရင်တော့ ဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်တတ်ပြီး ဒါတွေကုို ကျင့်ကြံရင်တော့ ချမ်းသာစေမှုကုို ဖြစ်စေနုိုင်တယ်”ဆုိုတဲ့ အကောင်းဆုံး လမ်းပြပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလုို လမ်းပြပေးနုိုင်တာဟာလည်း ကုိုယ်တော်မြတ် ကုိုယ်တော်တိုင် သံသရာ အဆက်ဆက်တွင် ဘဝနှင့်ရင်းပြီး ပါရမီများကုို ဖြည့်ကျင့်တော် မူခဲ့မှုကြောင့် အမှန်တရားကုို ကုိုယ်တော်တုိုင် သိမြင်တော်မူကာ သတ္တဝါတွေကုိုလည်း ကုိုယ်တော်မြတ် သိတော်မူတဲ့အတုိုင်း သိစေတော်မူနုိုင်တဲ့ ဗုဒ္ဓအရှင် ဖြစ်တော်မူတဲ့ အတွက်ကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆုိုတော့ကား ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ ဟောပြောချက်များဟာ သတ္တဝါများ ဆင်းရဲကင်းဝေး ချမ်းသာရေးအတွက် ဟောကြားလမ်းညွန်ချက်များ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဆင်းရဲတာ ချမ်းသာတာတွေဟာ သတ္တဝါတွေရဲ့ လုိုက်နာကျင့်သုံးမှုနဲ့ပဲ သက်ဆုိုင်သွားတော့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြတ်ဗုဒ္ဓဟာ ကယ်တင်ရှင် မဟုတ်တဲ့အပြင်၊ ဖန်ဆင်းရှင်လည်း မဟုတ်တဲ့အတွက် သတ္တဝါတွေကုို ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကယ်တင်ပေးမှာ မဟုတ်ပေမယ့် ဆင်းရဲဒုက္ခမရောက်အောင်တော့ တုိုက်တွန်းလမ်းပြပေးတော်မူတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီလမ်းညွန်ချက်အတုိုင်း လက်တွေ့လုိုက်နာ ကျင့်သုံးနုိုင်တဲ့သူကတော့ ဆင်းရဲကင်းပျောက် ချမ်းသာရောက်စေမှာ အမှန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မြတ်ဗုဒ္ဓဟာ လမ်းကုိုသာ ညွန်ပြတော်မူတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် သတ္တဝါ တစ်ဦးတစ်ယောက် ဆင်းရဲချမ်းသာတယ်ဆုိုတာဟာ ဒီလမ်းညွန်မှုအတုိုင်း ကျင့်ကြံမှုရှိမရှိနဲ့ပဲ သက်ဆုိုင်သွားတော့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကုို လိုက်နာကျင့်သုံးမိလုို့ ဆင်းရဲရောက်သွားတယ်ဆုိုတာဟာ ဗုဒ္ဓညွန်ကြားချက်အတုိုင်း မလျှောက်မိဘဲ ညွန်ကြားချက်ကုိုဖောက်ပြီး အမှောင်လမ်းနဲ့၊ အမှားလမ်းကုို လျှောက်မိသွားကြလုို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လောကမှာကြည့်ရင် ဗုဒ္ဓဓမ္မနဲ့အညီ ကျင့်သုံးနေထုိုင်ကြတဲ့ သူတွေဟာ ဆင်းရဲတဲ့သူဆုိုတာ မရှိဘဲ ချမ်းသာတဲ့ သူတွေချည်းပဲ ဆုိုတာ အခုိုင်အမာ တွေ့ရှိနုိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ ချမ်းသာမှုဟာ မျက်မှောက်ခေတ်လူတွေ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ငွေကြေးဥစ္စာ အသွင်သန္တာန်များနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ ချမ်းသာမှုမျိုးကတော့ ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာပါ။ စိတ်ပုိုင်းဆုိုင်ရာ ချမ်းသာမှုမျိုးဆုိုတာတော့ အသေအချာအပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အချုပ်ပြောလုိုတာက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာနုိုင်ငံတွေ ဆင်းရဲတယ်ဆုိုတာ ဗုဒ္ဓဘာသာကုို ကုိုးကွယ်လုို့၊ ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့ အဆုံးအမတွေမှာ လုိုက်နာမိလုို့ ဆုိုတာမျိုး မဟုတ်ဘဲ ဗုဒ္ဓညွန်ကြားချက်အတုိုင်း မလုိုက်နာမိလုို့၊ သတ္တဝါတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှု လွဲနေလုို့၊ လျှောက်လှမ်းတဲ့လမ်းဟာ မမှန်ကန်လုို့ စတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ လွဲမှားချက်များကြောင့်ပဲဆုိုတာ ပြောလုိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေထဲမှာလည်း ဘုရားဟောအတုိုင်း ဓမ္မနဲ့အညီ နေထုိုင်ရင်း မှန်ကန်တဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုနဲ့ လျှောက်လှမ်းကာ ချမ်းသာနေကြတဲ့ သူတွေလည်း အများအပြား ရှိနေတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် သူတုို့သူတုို့ရဲ့ ချမ်းသာမှုဟာ ဘဝထဲမှာ ဓမ္မတွဲရင်း ပစ္စုပ္ဗန်သံသရာ နှစ်ဖြာချမ်းသာမှုကုို ဖြစ်စေတဲ့ ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့ ညွန်ကြားချက်ကြောင့်ပဲဆုိုတာ သိစေချင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဟာ သတ္တဝါတွေ ဒုက္ခရောက်စေတဲ့ ဆင်းရဲကြောင်းတရားကုို မဟောဘဲ သတ္တဝါများ ပစ္စုပ္ဗန် သံသရာ ချမ်းသာရေးနဲ့ ဘဝအဆုံး ချမ်းသာရေးကုိုသာ ဟောကြားတော်မူကြောင်း အခုိုင်အမာ ပြောဆုိုနုိုင်တာ ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးတင်ပြရင်း ဗုဒ္ဓနှင့် ဗုဒ္ဓဝါဒအကြောင်း၊ ဗုဒ္ဓဝါဒီများအကြောင်း တစေ့တစောင်း မီးမောင်းထုိုးပြလုိုက်ရပါတယ်။